လူကြီးဘဝ၌မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းအကြားဆက်နွယ်မှုသည်မက်လုံးနှင့်ဟိုက်ဒွန်နစ်ဖြစ်စဉ်များအကြားနယ်နိမိတ်များကိုမှုန်ဝါးစေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သလား။ (2019) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
မက်လုံးပေးခြင်းနှင့် hedonic ဖြစ်စဉ်များအကြားနယ်နိမိတ်တစ် Blur ထံမှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရလဒ်အတွက်လူကြီးနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအတွက်မူးယစ်ဆေးစွဲအကြား link ကိုတတျနိုငျသ? (2019)
အလွဲသုံးစားမှု Rehabil။ 2019; 10: 33-46 ။
2019 ဇူလိုင် 12 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.2147 / SAR.S202996
Fiona Kehinde,1 Opeoluwa Oduyeye,2 နှင့် Raihan Mohammed1
လူကြီးဘဝတွင်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစတင်ခြင်းနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေသည်ဟုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သဘောတူညီမှုရှိသည်။ သို့သော်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့မှုအကြားဆက်နွယ်မှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲစွဲလမ်းမှုအားနည်းခြင်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုအပြည့်အဝနားမလည်နိုင်သေးပါ။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်ပုံမှန်ဆုလာဘ် - တိုက်နယ်၏နောက်ဆုံးပေါ်ရည်ညွှန်းချက်အမှတ်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်စွဲတွင်ဖြစ်ပေါ်သော maladaptive အပြောင်းအလဲများကိုပေးရန်ဆုနှင့်စွဲလမ်းမှုအပေါ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလေ့လာမှုများမှသက်သေအထောက်အထားများကိုပထမဆုံးအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေ့လာမှုများမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ဝိသေသအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစရိုက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစွဲလမ်းမှုအတွက်ဆုပေးသည့်ပရိုဖိုင်းများအကြားအကျိုးတူဖြစ်စဉ်များသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်စတင်သောအခါအဘယ်ကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင်စွဲလမ်းမှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အကြောင်းအရင်းကိုရှင်းပြရန်ကူညီနိုင်သည်။ ကျနော်တို့စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ရသောမက်လုံးနှင့် hedonic ဖြစ်စဉ်များအကြားနယ်နိမိတ်၏မှုန်ဝါးကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအန္တရာယ်အချက်တစ်ချက်ကြောင်းငြင်းခုန်။ ဤမှုန်ဝါးမှုကိုဖြန်ဖြေပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာနားလည်ထားခြင်းသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်နည်းလမ်းသစ်များကိုဖွင့်ပေးနိုင်ပါသည်။
keywords: စွဲ, dopamine, ထကြွလွယ်သော, compulsive, opiate
ယူအက်စ်တွင်အထက်တန်းကျောင်းသားများ၏ 75% သည်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ အရက်ယမကာသောက်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်သည့်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲသူများဖြစ်သည်ဟုသတင်းများကဖော်ပြသည်။1 မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံသည်အလွန်မြင့်မားသောပလတ်စတစ်ဖြစ်သည်။2 ဒီကိန်းဂဏန်းကထိတ်လန့်စရာမြင့်မားသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သည်ဖွံ့ဖြိုးမှုကာလဖြစ်သည် (အများအားဖြင့်) အသက်အရွယ် 10 တွင်အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်စတင်ရန်စတင်ခဲ့သည်။ 20 အရွယ်တွင်လိင်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်မှုပြီးဆုံးသောအခါအဆုံးသတ်သည်။3,4 အပြုအမူအားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုမြင့်မားစေခြင်း၊5,6 ဤအထိခိုက်မခံသောဖွံ့ဖြိုးမှုကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်လူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိနေသောစွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများနှင့်မကိုက်ညီသောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
စွဲလမ်းမှုကိုမကောင်းသောအကျိုးဆက်များရှိစေကာမူဆက်လက်သုံးစွဲနေသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပုံစံကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။7 ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲလိုသည့်ပြင်းပြသောဆန္ဒ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အခက်အခဲနှင့်ဇီဝကမ္မသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုမှုတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။8 ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကိုကင်းသုံးစွဲသူခြောက် ဦး လျှင်တစ် ဦး သာမှီခိုမှုဖြစ်ပေါ်ကြောင်း၊9 အချို့သောသူများသည်အခြားသူများထက်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကိုဖွံ့ဖြိုးရန်ပိုမိုအားနည်းနေကြောင်းထင်ရှားသည်။ ဤတစ် ဦး ချင်းအားနည်းချက်သည်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုစတင်ခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစရိုက်များမရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။10 impulsivity, compulsive ကိုကင်းရှာကြံခန့်မှန်းထားတဲ့10 နှင့်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုတိုးပွားလာခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့်စိုးရိမ်စိတ်။11
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းရောဂါသည်လည်းလူကြီးဘဝတွင်စွဲလမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအန္တရာယ်အချက်ဖြစ်သည်။1 မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးစွဲရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုထိန်းချုပ်သောနောက်ခံအာရုံကြောတိုက်ဖျက်ရေးကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာနားလည်မှုသည်အချို့သူများအတွက်အန္တရာယ်နှင့်အခြားသူများအားခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ ဤနားလည်မှုသည်လူကြီးဘဝ၌စွဲလမ်းမှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ထိရောက်စွာကုသရန်အတွက် အသုံးချ၍ ကာကွယ်နိုင်သောကာကွယ်ရေးယန္တရားများကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။
ဤသုံးသပ်ချက်သည်ဤအသက်အရွယ်တွင်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကိုစတင်သောအခါအရွယ်ရောက်သူစွဲလမ်းမှု၏ etiology ကိုပိုမိုနားလည်ရန်အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူး၏အခြေခံ neurocircuitry ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ရည်ရွယ်သည်။ အကျိုးကျေးဇူး၏ ဦး နှောက်ယန္တရားများကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်သို့မဟုတ်သဘောသဘာဝအရခွဲခြားနိုင်သည်။ ဆုလာဘ်၏ဤရှုထောင့်အသီးသီး disociable မက်လုံးပေးနှင့် hedonic ဖြစ်စဉ်များအပေါ်အားကိုးရန်ထင်နေကြသည်။12 ကျွန်ုပ်တို့သည်“ လူကြီးဘဝ၌မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုခြင်းအကြားဆက်နွယ်မှုသည်မက်လုံးနှင့်ဟီဒွန်နစ်ဖြစ်စဉ်များအကြားနယ်နိမိတ်များကိုမှုန်ဝါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သလား” ဟူသောမေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏အဓိကတွေ့ရှိချက်များကိုအကျဉ်းချုပ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ စားပွဲတင် 1.
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင် dopamine နှင့် opioids နှစ်မျိုးလုံးသည်မက်လုံးများနှင့် hedonic ဖြစ်စဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဤအနှစျခု neurotransmitter ၏အခန်းကဏ္ between များအကြား dissociation တစ်ချိန်ကထင်ထက်လျော့နည်းကွန်ကရစ်ဖြစ်ပါတယ်။
neurobiologically မြင်သောမက်လုံးနှင့် hedonic ဖြစ်စဉ်များအကြားမှုန်ဝါးကိုလည်းအပြုအမူမြင်သည်, အဆိုပါအမူအကျင့်စရိုက်များအာရုံ - ရှာကြံနှင့်ထကြွလွယ်သောအကြားနယ်နိမိတ်မှုန်ဝါးလည်းမရှိ။
ပြောင်းလဲမှုရှိသောဆုလာဘ် - သင်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်သိပ္ပံနည်းကျထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးစွဲမှုကိုကြီးထွားလာစေနိုင်သည့်အရွယ်ရောက်လာခြင်းနှင့်အတူတိုးပွားလာနိုင်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါရှိသည့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ ဦး နှောက်တွင်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အန္တရာယ်ရှိသည့်ဆယ်ကျော်သက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှရလဒ်ကောင်းများထွက်ပေါ်လာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်တိရစ္ဆာန်များမှသာမကလူ့လေ့လာမှုများမှအထောက်အထားများကိုရယူပြီးကတည်းက (ကြည့်ပါ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ), ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးထံမှအချက်အလက်များ၏အသုံးဝင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရကန့်သတ်ထားတဲ့အချက်များရှိပါတယ်အသိအမှတျပွုရမညျ။ ဤအချက်များပါဝင်သည်မှာ - လူကြီးဘဝရောက်သည့်အချိန်နှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေရေးရာကွဲပြားခြားနားမှုများ၊13 ဤဖွံ့ဖြိုးမှုကာလနှင့်ဆက်နွယ်သောအမျိုးမျိုးသောခွင့်ပြုထားသောလူမှုရေးလုပ်ဆောင်မှုများကို ဦး ဆောင်ခြင်း၊1 အပျိုဖော်ဝင်သောအခါအပြန်အလှန်ပြောင်းလဲခြင်း2 (တူညီသောအသက်အရွယ်ရှိတစ် ဦး ချင်းစီသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်နှင့်မတူနိုင်သည်); နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ဖို့လူသိများကြောင်းစရိုက်များ၏ရှေ့တော်၌အချင်းချင်းတစ် ဦး ချင်းစီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ10 (အထက်တွင်ဖော်ပြထား) ။ ဤအချက်များသည်လူ့လေ့လာမှုများတွင်များသောအားဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ပconflictိပက္ခဖြစ်ရသည့်ရလဒ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းရှင်းပြခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်လူကြီးဘ ၀ တွင်မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအပြည့်အဝရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်ပြောင်းလဲမှုများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိထိန်းချုပ်ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး၊14
အရေးကြီးသည်မှာဆုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဓိကဝေါဟာရများ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ်သဘောတူညီမှုမရနိုင်သည့်ကျယ်ပြန့်သောသုတေသနနယ်ပယ်တွင်ပျက်ကွက်ခြင်းသည်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုတည်းကိုလေ့လာခြင်းသည်ကွဲပြားသောအရာများကိုလေ့လာလေ့ရှိပြီး“ ကွဲပြားသော” ဆောက်လုပ်မှုများအပေါ်လေ့လာမှုများသည်အတူတူပင်လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အဓိကဝေါဟာရများကိုသတ်မှတ်ထားသည် စားပွဲတင် 2.
အာရုံ - ရှာကြံဝတ္ထုအတွေ့အကြုံများမှရှာဖွေခြင်း။2
ဆုလာဘ် - sensitivity ကို: လှုံ့ဆော်မှု၏အကျိုးဂုဏ်သတ္တိများမှ sensitivity ကို, "အကြိုက်" ။18
မက်လုံးပေးဖြစ်စဉ်များ: အပြုအမူလိုသော / ချဉ်းကပ်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အာရုံကြောယန္တရားများ။12 ဤလုပ်ငန်းစဉ်များသည်လျှော့ချရေးကိုသာမောင်းနှင်သည်မဟုတ်ဘဲဆန္ဒများနှင့်မက်လုံးများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
ဆု: တစ်လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးမှစွပ်စွဲသည့်ပုဂ္ဂလဒိpleasure္အပျော်အပါးဖော်ပြသည်။ ပုဂ္ဂလဓိive္ဌာန်ကျကျကျေနပ်မှုဆိုသည်မှာအာရုံခံအပြောင်းအလဲ (အပြုသဘောဆောင်သောခံစားချက်များ) ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်၏ထူးခြားသောပြောင်းလဲမှုများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။79
စစ်ကူးအားဖြည့်ခြင်း: အကြားဆက်နွယ်မှုတစ်ခုအားကောင်းလာခြင်း - အခြေအနေနှင့်ခြွင်းချက်မရှိသောလှုံ့ဆော်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုနှင့်ရလဒ်တစ်ခု။15 အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်ဆေးများကဆက်နွယ်သောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်စေပြီးအပျက်သဘောဆောင်သောအားဖြည့်ဆေးများကိုချန်လှပ်ထားပါကဆက်နွယ်မှုရှိသောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။79
circuit ကိုဆုချအပြုအမူ၊ လိုချင်သောအပြုအမူ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသင်ယူမှုနှင့်အပျော်အပါးတို့အတွက်တာဝန်ရှိသောအာရုံကြောဖွဲ့စည်းပုံ။12,81
dopaminergic ဂီယာdopamine သည်အခြားအာရုံခံဆဲလ်များ၌လှုပ်ရှားမှုနှင့်အခြားဆဲလ်များမှဒီ dopamine ပြန်လည်ထိတွေ့မှုတို့နှင့်ပတ်သက်သောဖြစ်စဉ်။83
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်လူကြီးတစ် ဦး အနေဖြင့်ဓာတုပစ္စည်းအသုံးပြုမှုရောဂါတိုးပွားခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုအဘယ်ကြောင့်တိုးမြှင့်ပေးသည်ကိုနားလည်ရန်၊1 ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ထံမှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဆိတ်ကွယ်ရာမှပထမ ဦး ဆုံးအရေးကြီးပါသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲ၏အကျဉ်းချုပ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကဤစာတမ်းသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များရှိဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲ၏သဘောသဘာဝကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်လေ့လာမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ဤစာတမ်းသည်ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများကိုနောက်ပိုင်းတွင်မီးမောင်းထိုးပြပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါဖွံ့ဖြိုးမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖြေရှင်းရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အကျဉ်းသမိုင်း: ဆု၏ dopamine အယူအဆ
1978 တွင်ရွိုင်းပညာရှိက dopamine အယူအဆကိုဆုချီးမြှင့်သည်။ ၎င်းသည် dopamine ဂီယာသည်ပုံစံအားလုံး၏အကျိုးကိုဖော်ပြသည်။15 ထိုအချိန်ကအဆိုပါယူဆချက်သည် mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းကိုလှုံ့ဆော်သောအပြုအမူအားသက်သေပြနေသည်။ အဆိုပါ mesolimbic လမ်းကြောင်း ventral tegmental areaရိယာ (VTA) ကိုနျူကလိယ accumbens (NaC) နှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်။16 ဤလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ထားခြင်းသည် NaC သို့ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုတိုးလာစေသည်။ ဤသည်တိုးမြှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်, အားဖြည့်, ရည်မှန်းချက် - ညွှန်ကြားထားနှင့်အလေ့အထအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ် -related လှုံ့ဆော်မှု၏ပိုကောင်းတယ်တိုးပွားစေပါသည်။17 အဆိုပါ nigrostriatal လမ်းကြောင်းဟာ dorsal striatum နှင့်အတူ substantia nigra ချိတ်ဆက်။ ဤလမ်းကြောင်းသည်ပုံမှန်အပြုအမူတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသောလှုပ်ရှားမှုထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်သည်။18 mesocortical လမ်းကြောင်းသည် VTA ကို prefrontal cortex (PFC) နှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်။ ဤသည်လမ်းကြောင်းသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်နှင့်အရှင် mesolimbic လမ်းကြောင်းနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။19 ထို့အပြင် dopamine သည် basolateral amygdala (BLA) မှသင်ယူလိုစိတ်နှင့်မက်လုံးကိုဖြန်ဖြေပေးသည်။20
Olds & Milner မှသူတို့၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိနေရာများစွာသို့ထည့်သွင်းထားသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းပါသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူများကြွက်များသည်မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်လီဗာကိုဖိအားပေးနိုင်ပြီးအချင်းချင်းအပြန်အလှန် cranial Self-stimulation (ICSS) ဟုခေါ်သည်။21 နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများက mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်ထည့်သွင်းထားသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ICSS တွင်အမြင့်ဆုံးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လှုံ့ဆော်ပေးသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည်ဤလမ်းကြောင်းအတွင်းရှိ extracellular dopamine ကိုတိုးပွားစေသည်။22 သောကြွက်များတွင်လီဗာ - နှိပ်အားဖြည့်ရန်ထင်ရှား။ , ထို့ကြောင့် ICSS ၏အချက်အလက်များအရ dopamine သည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအားဖြည့်ပေးသည်။
Wise ၏သီအိုရီကိုလည်း ဦး နှောက် micro-dialysis လေ့လာမှုများကထောက်ခံခဲ့သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ကြွက်များတွင် Di Chiara & Imperato23 dopamine ပမာဏသည် NaC တွင်လိင်အပြုအမူမတိုင်မီနှင့်စဉ်အတွင်းတိုးတက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Pfaus et al သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါများတွင်များသောအားဖြင့်ပါ ၀ င်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်သော opiates, alcohol နှင့် amphetamine ကဲ့သို့သောအရွယ်ရောက်ကြွက်များ၏ NaC တွင် extracellular dopamine တိုးပွားလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။24 ဤသက်သေသာဓကပြသမှုက dopamine သည်ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းပြသသည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာမှုများသည် Wise ၏သီအိုရီကိုလည်းထောက်ခံသည်။ Hoebel et al သည်လူကြီးကြွက်များကို NaC ထဲသို့ထည့်သွင်း။ amphetamine နှင့်ဆား၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုနှုန်းကိုတိုင်းတာသည့်အခါ Hoebel et al သည်ကြွက်များအား Self- adminaffhetamine ကိုဖိအားပေးသည်။25 ထို့အပြင်ခုနှစ်, Yokel & ပညာရှိကြောင်း neuroleptics (။ ။ ) တွေ့ရှိခဲ့2အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် amphetamine ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မှုနှုန်းကျဆင်းခြင်း။26 Neuroleptics ဆေးများအနိမ့်အမြင့်တွင်ကြွက်များသည်ရန်လိုမုန်းတီးမှုကိုကျော်လွှားရန်အတွက်လီဗာ၏ဖိအားကိုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် neuroleptics ဆေးများစွာသောက်ခြင်းဖြင့်ကြွက်များသည်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းကိုများစွာလျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် neuroleptics များသည်အမ်ဖီတမင်း၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးယင်းက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုကိုလျှော့ချပေးသည်။ အတူတူယူ, ဒီသက်သေသာဓက dopamine amphetamine ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုကမကထပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
သို့သော် Wise ၏ dopamine အယူအဆအတွက်ကန့်သတ်ချက်များစွာရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာ dopamine သည်မူးယစ်ဆေးဝါးအားလုံးကိုမိမိဘာသာအုပ်ချုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ Dopamine receptor antagonism သည်ဘိန်းဖြူကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု၌ဆေးထိုးမှီခိုမှုအစားထိုးပေးမှုတိုးမြှင့်ခြင်းကိုမဖြစ်စေခဲ့သော်လည်း naltrexone နှင့် MOR (mu-opioid-receptor) ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကလည်း၊27 ဘိန်းဖြူ၏အဓိကအားဖြည့်သက်ရောက်မှုများကို dopamine အချက်ပြခြင်းဖြင့်မဟုတ်ဘဲ opiate အချက်ပြခြင်းဖြင့်ကမကထပြုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ICSS နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစမ်းသပ်မှုများ၌လိုချင်ခြင်းနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းဆိုင်ရာယန္တရားများကိုခွဲထုတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ dopamine သည်ဆုလာဘ်များအားလုံးကိုဖျန်ဖြေပေးသည်ဟုကောက်ချက်ချရန်မမှန်ကန်ပါ။ နောက်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ကြွက်များတွင်အစာကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမှအလိုရှိသည့်ယန္တရားများကိုခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။28 မွေးကင်းစလူသားများနှင့်ကြွက်များသည်ချိုမြိန်။ ခါးသောအရသာကိုထူးခြားစွာအကျိုးသက်ရောက်စေသောတုံ့ပြန်မှုများပြုလုပ်ကြသည်။ ချိုသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုအပြုသဘောဆောင်သောတုန့်ပြန်မှုများတွင် paw လျက်နှင့်လျှာထွက်ခြင်းတို့ပါဝင်ပြီးခါးသောအရသာအပေါ်အပျက်သဘောတုံ့ပြန်မှုများမှာစပျစ်သီးနှင့် ဦး ခေါင်းကိုလှုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။21 ဤ orofacial အစီအမံများသည်အစားအစာဆုကိုကြိုက်နှစ်သက်သည့် neurocircuitry ကိုလေ့လာရန်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ Pecina et al သည်ကြွက်များကို dopamine receptor antagonist ကိုပေးပြီးကြွက်များသည်အရသာရှိသောအစာကို orofacial တုန့်ပြန်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။29 ဤသည် dopamine အစားအစာဆုကို၏ hedonic အဘိုးပြတ်ထိန်းချုပ်မထားဘူးကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ၎င်းအစား opiate အချက်ပြမှုသည်အခန်းကဏ္ to မှပါ ၀ င်သည်။ MOR ၏ agonism သည်ကြွက်များတွင်အာဟာရဖြစ်စေသောအစာကို orofacial တုံ့ပြန်မှုများပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်ဟူသောအချက်ကသက်သေပြနေသည်။30 သို့သော် orofacial တုန့်ပြန်မှုသည် cortex နှင့် debracbrated တိရိစ္ဆာန်များမရှိသောမွေးကင်းစကလေးများအားထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။12 ထိုအပြုအမူများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောသိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအားမကိုးသောကြောင့်ထို့ကြောင့်ဤအချက်အလက်တစ်ခုတည်းကိုလူသားများတွင်ပုဂ္ဂလိကပျော်မွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နိဂုံးချုပ်ရန် အသုံးပြု၍ မရပါ။
လူသားများတွင်လိုချင်မှုနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်မှုသည်ပုဂ္ဂလဒိreports္ဌာန်အစီရင်ခံစာများကို သုံး၍ ခွဲထုတ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် L-Dopa သည်မူးယစ်ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်ထဲတွင် dopamine ပမာဏတိုးစေသည်။ သို့တိုင် Parkinson ရောဂါကိုကုသရန် L-Dopa ကိုပေးသောလူနာများသည်မိမိကိုယ်ကိုမပျော်မရွှင်ဖြစ်မိသည်။31 ဤအချက်ကမိုက်မဲစွာတည်ဆောက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သော dopamine သည်ဆုလာဘ်နှင့်အမြဲဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆုလာဘ် circuit ကို၏လက်ရှိအမြင်များ
လူ့လူနာများထံမှနောက်ထပ်တွေ့ရှိချက်များသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆုလာဘ်စနစ်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုမြင်ပုံကိုပုံသွင်းပေးသည်။ ထူးခြားသည်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများခံစားနေရသောလူနာများသည်စိတ် ၀ င်စားမှုခံစားမှုမပါဘဲမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအလွန်တရာလိုချင်တောင့်တကြောင်းဖော်ပြလေ့ရှိသည်။32 မက်လုံးပေးနှင့် hedonic ဖြစ်စဉ်များအကြားရှင်းရှင်းလင်းလင်း dissociation ညွှန်ပြ။
Dopamine သည်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသည့်အကျိုးကျေးဇူးများတွင်မပါ ၀ င်သော်လည်း၊ ၎င်းသည်ဆုများနှင့်ဆုလာဘ်များ - ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်အချက်များမှစွပ်စွဲထားသည့်ထူးခြားချက်နှင့်မက်လုံးများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုတန်ဖိုးကိုအမှန်ပင်ဖော်ညွှန်းနိုင်သည်။32 စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားများမက်လုံးပေးဖြစ်စဉ်များအတွက် dopamine ရဲ့အခန်းကဏ္supportsကိုထောက်ခံပါတယ်။
ပထမ ဦး စွာ ICSS သည်ယခုအခါအားဖြည့်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ICSS ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော NaC တွင် extracellular dopamine တိုးများလာခြင်းကလီဗာ၏ဖိအားကိုတိုးစေသည်။12 ထို့ကြောင့်လူကြီးများကြွက်များအနေဖြင့်လီဗာကိုဖိအားပေးရန်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းကြောင့်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီးထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းမှပျော်ရွှင်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။
dopamine သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူသားများအတွက်မက်လုံးဖြစ်စေသည့်ဖြစ်စဉ်များကိုဖျန်ဖြေပေးသည်ဟူသောခိုင်လုံသောအထောက်အထားများလည်းရှိသည်။ NaC ကဲ့သို့သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရသောလူနာများအတွက်နက်ရှိုင်းသော ဦး နှောက်ကိုနှိုးဆွပေးခြင်းသည်တိကျသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်သူတို့၏ဆန္ဒကိုတိုးစေသည်။33 ထို့အပြင်ပါကင်ဆန်ရောဂါခံစားနေရသောလူနာများကို dopamine agonists များဖြင့်ကုသသည့်အခါမူးယစ်ဆေးဝါး၊ လောင်းကစားခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည့်ပြင်းထန်သောဆန္ဒများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။34
ဒုတိယအချက်မှာမက်လုံးပေးဖြစ်စဉ်များကိုလည်း nigrostriatal လမ်းကြောင်းအတွင်း dopaminergic ဂီယာစုဆောင်းမှုအားဖြင့်ကမကထပြုခဲ့နိုင်ပါသည်။ Difeliceantonio & Berridge သည်ထပ်ဆင့်အားဖြည့်ခြင်းအစီအစဉ်အရ Succose ကိုတုံ့ပြန်ရန်ကြွက်များအားလေ့ကျင့်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်နွယ်သောအခြေအနေ - အားဖြည့်ဆေးသည် sucrose မဝင်ရောက်မီနှောင့်နှေးသည့်အချိန်တွင်ရှာဖွေနေသော sucrose ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။35 ကြွက်အချို့သည် conditional stimulus (CS) သို့ ဦး တည်သည့်အပြုအမူကိုရှာကြံပြီးအခြားသူများကမူပန်းကန်ဆီသို့ ဦး တည်သောအပြုအမူကိုရှာဖွေသည်။ ဤကြွက်များကိုဆိုင်းဘုတ်များနှင့်ဂိုးသွင်းသူဟုခေါ်သည်။ ကြွက်များ၏ dorsolateral striatum (DLS) ထဲသို့အမ်ဖီတမင်းဆေးထိုးခြင်းကဆိုင်းဘုတ်များတွင်ခြေရာခံနိုင်ခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံများတွင်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံခြင်းတို့ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် CS-lever ၏တင်ပြချက်များကိုလက်လှမ်းမီစေရန် sign-tracker များသည်အလုပ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီးစမ်းသပ်မှုအတွင်းတည်နေရာအသစ်များသို့လီဗာကိုလိုက်နာလိမ့်မည်ဟုလည်းသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤအချက်သည် DLS ရှိ dopamine သည်အေးစက်သောချဉ်းကပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက်ဆုလာဘ် - ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်အချက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေကြောင်းပြသသည်။ သို့သော်စာရေးသူများက cue ဆွဲဆောင်မှုတိုးတက်မှုများသည်ပိုမိုအားကောင်းသည့်ရည်မှန်းချက်ကိုအခြေခံသည့်အပြုအမူများကြောင့်မဟုတ်ဘဲပိုမိုအားကောင်းသည့်အလေ့အထများကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းနိဂုံးချုပ်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီသက်သေအထောက်အထားကမညွှန်ပြပါ; အစား, ကလီဗာသူ့ဟာသူအေးစက်အားဖြည့်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသည်။ DLS မှ dopamine သည်အလေ့အကျင့်ကောင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အတွက်ရည်မှန်းချက်၏ရလဒ်ကိုတန်ဖိုးနိမ့်စေသောတန်ဖိုးလျော့နည်းခြင်းစမ်းသပ်မှုများလိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ထိုအပြုအမူများသည်ပုံမှန်အတိုင်းသာဖြစ်ခဲ့ပါကအလေ့အထများကိုလှုံ့ဆော်မှု - တုန့်ပြန်သောအသင်းအဖွဲ့များမှထိန်းချုပ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ရည်မှန်းချက်တန်ဖိုးလျှော့ချခြင်းကိုခုခံနိုင်လိမ့်မည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်စမ်းသပ်ချက်များကလှုံ့ဆော်သောအပြုအမူ၏လိုအပ်သောအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်သောမက်လုံးများဖြစ်စဉ်များသည် mesolimbic လမ်းကြောင်းရှိ dopamine ဂီယာမှတဆင့်အဓိကအားဖြင့်ကမကထပြုခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဆုများရရှိလိုခြင်း၌ dopaminergic တိုးများလာခြင်းသည် hedonic အဘိုးပြတ်မှုအပြောင်းအလဲမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းမက်လုံးနှင့်ဟဒွန်နစ်ဖြစ်စဉ်များအကြားခွဲခြားမှုရှိပုံရသည်။ သို့သော်အဘယ်အရာသည်ဤ hedonic ဖြစ်စဉ်များကိုအုပ်ချုပ်?
လူကြီးများအတွက် Hedonic ဖြစ်စဉ်များ
endogenous opiates hedonic ဖြစ်စဉ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ play မှပုံပေါ်ပါတယ်။ MOR နှင့် DOR (delta-opioid-receptor) agonists ကို NaC medial shell ၏ rostrodorsal quadrant သို့ထိုးသွင်းခြင်းသည်ကြွက်များတွင်ချိုသောအရသာကို orofacial တုန့်ပြန်မှုတိုးပွားစေသည်။17 ထို့အပြင် NaC ၏အဓိကထွက်ရှိဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖြစ်သောကြွက်များ၏ posterior ventral pallidum (VP) အတွင်း MOR သည်အလွန်ပူဆွေးသောကသည်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသောပြည်နယ်များအတွင်းရှိ sucrose ကြိုက်သလောက်ပုံမှန်တိုးပွားခြင်းကိုတားဆီးထားသည်။36 အတူတူယူဒီဒေတာ NaC medial shell ကိုနှင့် posterior VP ၏ rostrodorsal quadrant hedonic ဟော့စပေါ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဤ hotspots အတွင်း opioid neurotransmission အစားအစာများကိုနှစ်သက် encoding ကြောင်းပြသပါ။
ဦး နှောက်ထဲမှာ hedonic hotspot နှစ်ခုရှိတယ်။ ကြွက်များတွင်ထုထည်အားဖြင့်တစ်မီလီမီတာကုဗခန့်ရှိသော NaC medial shell hotspot သည် rostrodorsal quadrant တွင်တည်ရှိသည်။ ဒုတိယဟော့စပေါ့သည်အနောက်ဘက် ventral pallidum ဖြစ်သည်။ MOR နှင့် DOR နှင့်ဤ hotspots အတွင်းအချက်ပြမှုများသည်ကြိုက်နှစ်သက်မှုတိုးပွားလာပြီး KOR stimulation သည်မနှစ်သက်သည်။17 ပြောင်းပြန် hedonic coldspots တည်ရှိ; ဤအအေးမိနေရာများရှိ MOR နှင့် DOR အချက်ပြမှုသည်ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုဖိနှိပ်သည်။ အအေးမိအစက်များသည် caudal NaC shell နှင့် anterior ventral pallidum အတွင်းတွင်တည်ရှိသည်။37 VP နှင့် NaC ရှိဟော့စပေါ့များသည်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ opiate အချက်ပြတစ်ခုareaရိယာ၌ပိတ်ဆို့လျှင်, အကြိုက်အတွက်တိုးထုတ်လုပ်မရနိုင်ပါ။17 အဆိုပါ NaC နှင့် VP ကိုဖြတ်ပြီး Opiate neurotransmission ဖြစ်စေခြင်းဆွဖြစ်ပေါ်ဘယ်မှာပေါ်မူတည်။ အကြိုက်တိုးမြှင့်သို့မဟုတ်ဖိနှိပ်; ဤနည်းအားဖြင့်ဤဆိုဒ်များတွင်ထိရောက်သောကီးဘုတ်ကိုထုတ်လုပ်သည်။28 ထို့အပြင်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် hypothalamus (LH) မှ VTA သို့ glutamatergic circuit ကို orexin က modulated ပြုလုပ်သည်။38 LH မှ Orexin သည်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကာလအတွင်းဘာသာတရားကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်ဤနေရာတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
opiates များကို hedonic ဖြစ်စဉ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်တွေ့ရှိချက်များကိုလည်းလူ့ဘာသာရပ်များတွင်ပုံတူကူးချထားပါသည်။ Ziauddeen et al သည် 18 – 60 MOR ၏ရန်သူဖြစ်သော GSK1521498 ကိုမူးယစ်ဆေးစွဲသူများအားပေးခဲ့သည်။39 ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအရက်သေစာသောက်သုံးသူများသည်သူတို့၏ချိုသောအစားအစာများကို hedonic တုံ့ပြန်မှုကသိသိသာသာကျဆင်းသွားကြောင်းပြသသည်။
အတူတူခေါ်ဆောင်သွား, dopamine ယခင်ထိန်းချုပ်နှင့်အဆုံးစွန်သော opiates နှင့်အတူမက်လုံးများနှင့် hedonic ဖြစ်စဉ်များအကြားခွဲခြားဘို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် (ပုံ 1) ။ သို့သော်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများသည်ကိုကင်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်က extracellular dopamine ပမာဏတိုးမြှင့်သောအခါမြင့်မားမှုနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုအဘယ်ကြောင့်မကြာခဏအစီရင်ခံရသည်ကိုဤအချက်ကမရှင်းပြပါ။40 ထို့ကြောင့်, ဒီ dissociation မှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်လိုအပ်ပါသည်။
မက်လုံးပေးနှင့် hedonic ဖြစ်စဉ်များအကြား dissociation ။ စေ့ဆော်မှုဖြစ်စဉ်များသည်လှုံ့ဆော်သောအပြုအမူ၏လိုချင်သော“ လိုသော” အဆင့်ကိုထိန်းချုပ်သည်။ ဒါဟာမက်လုံးပေးဖြစ်စဉ်များ dopaminergic အချက်ပြခြင်းဖြင့်ကမကထပြုခဲ့ကြောင်းကျယ်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, hedonic ဖြစ်စဉ်များလှုံ့ဆော်အပြုအမူ၏ consummatory အဆင့်အုပ်ချုပ်။ သူတို့ကဆုလာဘ်များနှစ်သက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ပြီး opioid အချက်ပြခြင်းဖြင့်ဖျန်ဖြေပေးသည်ဟုယူဆကြသည်။
အဆိုပါ dissociation နောက်ထပ်စူးစမ်း
ပိုမိုနီးကပ်စွာစစ်ဆေးမှုတွင်ဘိန်းနှင့်အခန်းကဏ္dနှင့် dopamine ၏အခန်းကဏ္ between အကြားခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သိမ်မွေ့နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုတည်ရှိခြင်းမရှိ။
ပထမအချက်အနေဖြင့်အထောက်အထားများအရသိပ္ပံနည်းကျမသိမသာကွဲပြားမှုများသည် psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများကိုထိန်းချုပ်သော hedonic ဖြစ်စဉ်များတွင်တည်ရှိသည်။ psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများမှာအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း dopamine အချက်ပြခြင်းနှင့် opiate အချက်ပြခြင်းအားဖြင့်ကမကထပြုခဲ့ကြပုံရသည်။ ဤသည် dopamine hedonic ဖြစ်စဉ်များအတွက်အခန်းကဏ္ play မှပုံပေါ်တဲ့အထူးမြင်ကွင်းတွေ့ရမယ်။ Giuliano et al သည်မိမိကိုယ်ကိုကိုကင်းသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူကိုကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲရန်ကြွက်များကိုလေ့ကျင့်ခဲ့သည်။41 MOR ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသူများ GSK1521498 သို့မဟုတ် naltrexone (NTX) ကိုပေးခဲ့သည်။ GSK1521498 တွင်ပိုမိုပြည့်စုံသောရန်သူပရိုဖိုင်းရှိသည်။ NTX သည် MORs တွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist လှုပ်ရှားမှုရှိသည်ဟုအစီရင်ခံထားသည်။42 စဉ်ဆက်မပြတ်အားဖြည့်ပေးသည့်အစီအစဉ်အရမူးယစ်ဆေးဝါးသည်ကိုကင်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုကိုသြဇာသက်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးနှစ်မျိုးလုံး၏ဆေးများသည်ဘိန်းဖြူ - ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ MOR ၏ရန်သူများကိုကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းသည် MOR-stimulation သည်ကိုကင်း၏အဓိကအားဖြည့်သက်ရောက်မှုများကိုဖျန်ဖြေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိုကင်းကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေးများသည် NaC ရှိ extracellular dopamine ပမာဏတိုးပွားစေသည်။ ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအရဤတိုးများပြားလာခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်စွာခံစားခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြသည်။43 Giuliano et al မှရရှိသောအထောက်အထားများနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောဤအထောက်အထားသည် dopamine သည်စိတ်ကြွဆေးကိုနှစ်သက်သောဖျန်ဖြေပေးသည့်သီအိုရီကိုအလေးပေးသည်။
သို့သော်လူသားများတွင် dopamine-receptor antagonism သည်လှုံ့ဆော်ဆေးများနှင့်ဆက်စပ်သောအမြင့်ကိုတသမတ်တည်းမလျှော့ချပါ။ ဥပမာအားဖြင့် dopamine-receptor antimist pimozide သည်အမ်ဖက်တမင်းသွေးဆောင်သောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုလူတို့မတားဆီးနိုင်ပါ။44 အခြားအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာလှုံ့ဆော်ပေးသောမူးယစ်ဆေးဝါးများသည် NaC ရှိ endogenous opioid system ကိုဒုတိယအကြိမ်စုဆောင်းခြင်းကြောင့်အစဉ်အဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ပျော်မွေ့ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။45 သို့သျောလညျး, ဒီစုဆောင်းမှုကိုမကြာခဏစဉ်ဆက်မပြတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ downregulated ဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုယူသည့်အခါစွဲမိမိကိုယ်ကိုရှုပ်ထွေးသောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာအစီရင်ခံသည်။ ၎င်းအစား dopamine တိုးများလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြင်းထန်သောလိုအင်ဆန္ဒများကိုလူသားတို့၏ပျော်မွေ့မှုအဖြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပိုမိုများပြားလာသည်။12 ထို့ကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်မှုနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုခွဲထုတ်ခြင်းသည်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခါမက်လုံးများနှင့် hedonic ဖြစ်စဉ်များအကြားတွင်ထပ်နေသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူမူးယစ်ဆေးစွဲမှုအတွက်ဆေးဝါးကုသမှုကုသမှုကိုစဉ်းစားသည့်အခါ၎င်းသည်စနစ်နှစ်ခုလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်ရန်အရေးကြီးသည်။
မဟုတ် - ဒါသိမ်မွေ့တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ
Dopamine အချက်ပြသည်လတ်တလောမက်လုံးများဖြစ်စဉ်များအပေါ်သီအိုရီဆိုင်ရာမူဘောင်များကိုလွှမ်းမိုးထားသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ တိုးပွားလာသောအလုပ်များကဘိုင်အိုအချက်ပြခြင်းတွင်လည်းပါ ၀ င်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒုတိယအစီအစဉ်အရအားဖြည့်ခြင်းအစီအစဉ်အရ MOR ၏ရန်သူ GSK1521498 ပေးသောကြွက်များသည်အစားအစာကိုမတင်ပြမီသူတို့၏အစားအစာရှာဖွေသည့်အပြုအမူကိုများစွာလျော့ကျစေခဲ့သည်။46 ဒုတိယအမိန့်အစီအစဉ်များသည်အားဖြည့်ခြင်းအစီအစဉ်များဖြစ်သည်။ Cue ထိန်းချုပ်မှုရှာဖွေခြင်းအပြုအမူကို dopamine neurotransmission ကထိန်းချုပ်ထားသည်ဟုယူဆရသော်လည်း GSK1521498 သည်ဤစမ်းသပ်မှုတွင်၎င်းအပြုအမူကိုလျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ ဤအချက်ကဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုသည်ဘိန်းတိုက်ဖျက်ရေးယန္တရားတွင်ပါ ၀ င်နေကြောင်းဖော်ပြသည်။ GSK1521498 ၏ VTA ရှိ GABAergic Interneurons များအပေါ် MORs အပေါ်လုပ်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အပြုအမူအားလှုံ့ဆော်မှုများကတုန့်ပြန်မှုအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ရှာဖွေခြင်းအပြုအမူကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
VTA ရှိ GABAergic interneurons များရှိ MORs တွင် Opioid လုပ်ဆောင်မှုသည် NaC တွင် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းအားသွယ်ဝိုက်စေပြီးမက်လုံးပေးလိုစိတ်တိုးပွားစေသည်။ Opiates သည် GTAAergic interneurons များကိုတားဆီးပေးသော VTA dopamine neurons များကိုတားဆီးသည်။47 Opiates သည် NaC အာရုံခံဆဲလ်များနှင့်အခြားသောဒေသများရှိ MORs များကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ Gi မှတစ်ဆင့် NaC အာရုံခံဆဲလ်ပေါ်ရှိ opiate receptors နှင့် dopamine receptors; ထို့ကြောင့်အချက်ပြတိုးမြှင့်ထားသည်။47
ထို့ကြောင့် GSK1521498 သည်ဤလမ်းကြောင်းရှိ MORs ရှိဘိန်းဘုရင်များ၏သွယ်ဝိုက်။ တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှုကိုတားဆီးပေးခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ GSK1521498 မှဖြစ်ပေါ်စေသောအပြုအမူအားရှာဖွေခြင်းအားလျှော့ချရန်အခြားရွေးချယ်စရာရှင်းပြချက်တစ်ခုရှိပါသည်။ မက်လုံးပေးသင်ကြားမှုအတွက် BLA ရှိ MORs လိုအပ်သည်။22,36 Incentive Learning ဆိုသည်မှာဆုတစ်ခု၏အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအနာဂတ်ဆုလာဘ်များရှာဖွေသည့်အပြုအမူအားလမ်းညွှန်ရန်မက်လုံးပေးတန်ဖိုးအဖြစ်စာဝှက်ပေးသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကွောင့် BLA ၌ဆန့်ကျင်သည့်အပြုအမူသည်အပြုအမူအားရှာဖွေခြင်းအားလျော့နည်းစေသည့်ပရိယာယ်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များကို encoding အားနည်းစေနိုင်သည်။ ဒေသတွင်းနှင့်စနစ်ကျသော MOR ရန်လိုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုတစ်ခုကဘိန်းစားသူများ၏အပြုအမူကိုရှာဖွေခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ကူညီလိမ့်မည်။
opioid neurotransmission သည်မက်လုံးဖြစ်စေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုဖျန်ဖြေပေးနိုင်သည့်အခြားဆိုဒ်များရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာသက်သေအထောက်အထားသည် DLS တွင်မက်လုံးပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် opiates များ၏အခန်းကဏ္supportsကိုအထောက်အကူပြုသည်။ MOR agonist DAMGO ကိုကြွက်များ၏ DLS ထဲသို့ထိုးသွင်းသည့် autoshaping စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်အပြုအမူအားရှာဖွေခြင်းသည်ကြွက်တစ်ကောင်စီနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကြွက်အချို့သည်ဆုလာဘ်ကိုမျှော်လင့်လျက်ပန်းကန်ပန်းကန်ဆီသို့သွေဖည်သွားပြီးအခြားသူများကမူ CS လီဗာဘက်သို့ကူးပြောင်းသွားသည်။ DAMGO ထိုးသည်ကြွက်နှစ်မျိုးစလုံးတွင် cue-control ချဉ်းကပ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ဤအချက်သည် DLS အတွင်းရှိ MOR agonism သည်အစာစားခြင်းဖြစ်စဉ်များတွင်အခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်ကိုပြသည်။35 ထို့အပြင် amygdala (CeN) ၏ဗဟိုနျူကလိယ၌ MOR ၏နာကျင်မှုမှာဆုလာဘ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များအားပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးကြွက်များတွင်အပြုအမူများရှာဖွေရန်တိုးပွားစေသည်။22
လူသားများတွင်စနစ်တကျကိုင်တွယ်ခြင်းကိုသာပြုလုပ်သည်။ Cambridge et al သည်အလယ်အလတ်အရက်သောက်စားသောအပြုအမူရှိသောလူနာများအား GSK1521498 ကိုပေးခဲ့သည်။48 ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုလက်ခံရရှိသောလူနာများသည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် transducer ကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အာဟာရရှိသောအစားအစာများ၏ပုံရိပ်များကိုထိန်းသိမ်းရန်အားစိုက်ထုတ်မှုနည်းသည်။ ဤအချက်ကမူးယစ်ဆေးဝါးသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထို့ကြောင့် opiates များသည်မက်လုံးများယန္တရားတွင်အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ Ziauddeen et al က GSK1521498 သည်ကိုယ်အလေးချိန်၊ အဆီအလေးချိန်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစားသုံးသူများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ရလဒ်များအရအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကစားခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးပုံရသည်။39 ထို့ကြောင့် MOR ၏ရန်သူများသည်လက်တွေ့တွင်လှုံ့ဆော်မှုရှိသောအပြုအမူအပေါ်ထိရောက်မှုကိုရောထွေးထားသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်အထောက်အထားများအရဘိန်းနှင့် dopamine နှစ်မျိုးလုံးသည်အချို့သောအခြေအနေများတွင်လိုချင်သည့်အပြင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုဖျန်ဖြေပေးသည်။ သက်သေသာဓကသည်ကြိုက်နှစ်သက်မှုသည်မက်လုံးများနှင့်ဟီဒွန်နစ်ဖြစ်စဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏သိမြင်မှုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့ကွောင့်မက်လုံးနှင့်ဟစ်ဒွန်နစ်ဖြစ်စဉ်များအကြားထပ်နေသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆုလာဘ်အစီအစဉ်တွင်ဤထပ်တူကျမှုသည်ဆယ်ကျော်သက်ဆုလာဘ်နှင့်ပတ်သက်သောသီအိုရီများကိုဆန်းစစ်ရန်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်သည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆုလာဘ်: dual- စနစ်များသီအိုရီ
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်စိတ်မ ၀ င်စားခြင်းစရိုက်များသည်ကွဲပြားသောဖွံ့ဖြိုးမှုလမ်းကြောင်းများအတိုင်းလိုက်နာသည်။5 မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အလယ်တွင်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများသည်မြင့်မားသည်။ အာရုံခံစားမှု - ရှာဖွေခြင်းသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်လျှောက်အသက်အရွယ်နှင့်ခန္တာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည် PFC နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် striatum ၏လျင်မြန်စွာရင့်ကျက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုချသော circuit ၏ hyperactivity ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ Impulse သည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်အသက်အရွယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအဆိုးမြင်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည် PFC ဖွံ့ဖြိုးလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုသိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုကိုထင်ဟပ်စေသည်။ ၎င်းသည်ရင့်ကျက်သောဆုလာဘ်စနစ်နှင့် PFC တွင်မရင့်ကျက်သောသိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်အကြားမညီမျှမှုကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်အာရုံခံစားမှုရှာကြံမှုနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုတိုးများလာသည်ဟုဖော်ပြထားသည့်စနစ်နှစ်မျိုးသီအိုရီ၏အခြေခံဖြစ်သည်။5 နောက်ဆက်တွဲကဏ္sectionsများသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းရရှိသောဆုလာဘ်ယန္တရားများကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်သောသိမြင်မှုပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့်အတူတစ်လျှောက်လုံးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေ့လာမှုများကိုရည်ညွှန်းသည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အာရုံခံစားမှု - ရှာကြံအုပ်ချုပ် neurocircuitry ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဒါဟာမက်လုံးပေးဖြစ်စဉ်များကမကထပြုခဲ့သောတိုက်နယ်၏ hyperactivity ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အာရုံ - ရှာကြံတိုးလာပုံရသည်။ Burton et al သည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်အေးစက်သောတုံ့ပြန်မှုများရရှိမှုကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။49 ပထမ ဦး စွာဆယ်ကျော်သက်နှင့်အရွယ်ရောက်ကြွက်များသည် sucrose သယ်ဆောင်ခြင်းကိုအလင်းရောင် - CS နှင့်ဆက်စပ်စေခဲ့သည်။ CS ကိုအပ်ပေးသောလီဗာပေါ်တွင်တုံ့ပြန်မှုသည် CS အား conditional reinforcer ဖြစ်လာခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်တိုင်းတာသည်။ ကျယ်ပြန့်သောလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ် (420 ရက်များအတွင်း 14 တွဲဖက်မှု) ပြီးနောက်၊ မြီးကောင်ပေါက်ကြွက်များသည်အရွယ်ရောက်သည့်ကြွက်များ၌မူတုံ့ပြန်မှုကိုရရှိခဲ့ပြီး၊ လေ့ကျင့်မှုအနည်းဆုံးလေ့ကျင့်မှုဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များသည်အားဖြည့်မှုအတွက်တုန့်ပြန်မှုရရှိနိုင်သည်။ ဤအချက်သည်လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်မက်လုံးပေးခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ စာရေးသူများအနေဖြင့်လည်းဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များအား dopamine နှင့် opioid receptor antagonists များအား ပေး၍ အခြေအနေတွင်တုန့်ပြန်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုတိုင်းတာသည်။ ဤအချက်ကဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဘိန်းနှင့် dopamine နှစ်မျိုးလုံးသည်မက်လုံးပေးသည့်ဖြစ်စဉ်များကိုဖျန်ဖြေရာတွင်အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ Dopamine သည် mesolimbic လမ်းကြောင်းရှိအချက်ပြခြင်းမှတစ်ဆင့်မက်လုံးပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီး opiates များသည် GTAAGic အတွင်းရှိ VTA ရှိ GABAergic Interneurons များရှိ BOR သို့မဟုတ် BLA ရှိ MORs များမှတဆင့်ဖြစ်စေမက်လုံးပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကိုတိုးမြှင့်သည်။
လူသားများထံမှအထောက်အထားများကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်မက်လုံးဖြစ်စေသည့်ဖြစ်စဉ်များကိုတိုးမြှင့်ထားသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပြုလုပ်သော fMRI လေ့လာမှုများကို meta-analysis သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆယ်ကျော်သက်များတွင် NaC ကိုပိုမိုတက်ကြွစေသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။50 ထို့အပြင်Urošević et al မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုမှ sensitivity ကိုအတွက် Self- အစီရင်ခံတိုး NaC အသံအတိုးအကျယ်တိုးခြင်းဖြင့်ထင်ဟပ်ခဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။6 အတူတူယူ, ဒီတိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများအနေဖြင့်သက်သေအထောက်အထားများ, NaC အတွက်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်မှုကြောင့်, မြီးကောင်ပေါက်အကျိုးလှုံ့ဆော်မှုပိုမိုသာလွန် salience တွေ့ကြုံခံစား။ ဤသည်ကဘာကြောင့်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တိုးပွားလာသည်ကိုရှင်းပြရန်ကူညီသည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပြုအမူအတွက် NaC လှုပ်ရှားမှု၏တိုးမြှင့်မှု၏ရှင်းပြနိုင်စွမ်းသည်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းတွင်တွေ့ရသောကျား၊ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ယောက်ျားလေးများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မိန်းကလေးများထက်ပိုမိုအာရုံခံစားမှုကိုပြသသည်။51 ဝိုင် Fortune လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၏ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုများကိုAlarcón et al နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။52 ယောက်ျားလေးများသည်မိန်းကလေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုမြင့်မားသော NaC လှုပ်ရှားမှုရှိသည်၊ ၄ င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအန္တရာယ်များသောဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အလုပ်အားဖြည့်သူများ၏စိတ်အားထက်သန်မှုမြင့်မားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ကျားမကွဲပြားမှုသည်လိင်ဟော်မုန်းပမာဏကွဲပြားမှုကြောင့်ကမကထပြုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ထို့ကြောင့်ဤသည်မြင့်မားသော NaC လှုပ်ရှားမှုသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောလှုံ့ဆော်မှုများပိုမိုများပြားလာခြင်းဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကြွက်လေ့လာမှုများအတွက်သက်သေအထောက်အထားကနေဆွဲ,49 ဒီပိုမိုမြင့်မား NaC လှုပ်ရှားမှုမက်လုံးပေးနှင့် hedonic ဖြစ်စဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့် neurobiological အလွှာများ၏လှုပ်ရှားမှုအကြားထပ်နေဖြင့်ကမကထပြုခဲ့ခံရပုံရသည်; dopaminergic transmission နှင့် opiate transmission နှစ်ခုလုံးသည်ဤတွင်အရေးကြီးသည်။
ဆယ်ကျော်သက်များသည်ဆုများထုတ်လုပ်စဉ်လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက NaC ကိုပိုမိုတက်ကြွစေကြောင်းတွေ့ရှိချက်အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာရှင်းပြချက်50 ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုတိုးလာ salience ဆန့်ကျင်အဖြစ်၎င်းတို့၏ ဦး နှောက်တစ်ခု phasic dopamine သင်ယူမှု signal ကိုရှိသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ Cohen et al သည် fMRI တွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် striatum ရှိ dopaminergic ခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြမှုများသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်53 ဤသည်ကအကျိုးရှိစေမည့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောသင်ယူမှုအချက်ပြမှုကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်သည်ဟုဆိုသည်။ မြင့်မားသော dopaminergic ခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြမှုသည် NaC အတွင်းရှိပိုမိုမြင့်မားသော activation ကိုရှင်းပြနိုင်ပြီးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်တွေ့ရသောတိုးပွားလာသောအာရုံ - ရှာဖွေမှုအပြုအမူကိုလည်းအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
အရွယ်ရောက်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆုလာဘ်မျှော်လင့်ချက်အဆင့်တွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းကြောင်းပြသသည့် fMRI လေ့လာမှုများမှသက်သေအထောက်အထားများအားဖြင့်ဤသီအိုရီကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။54 သို့သော်ဆုလာဘ်အဆင့်၏အသိပေးချက် / ရလဒ်စဉ်အတွင်းသူတို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်လှုပ်ရှားမှုတိုးလာပြသပါ။55 ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်လည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်စွဲ၏ဝိသေသဖြစ်ကြသည်။ Luijten et al သည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါရှိသည့်အရွယ်ရောက်သူများသည်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ချက်အတွင်း fMRI ကိုသက်ဝင်စေမှုကိုလျော့နည်းစေပြီးအကျိုးရလဒ်ရလဒ်ကာလအတွင်း ventral striatum လှုပ်ရှားမှုကိုတိုးပွားစေခဲ့သည်။56 မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသောပစ္စည်းဥစ္စာသုံးစွဲမှုရောဂါနှစ်မျိုးလုံးတွင်တွေ့ရသောတွေ့ရှိချက်များကိုရှင်းပြချက်သည်ဆုလာဘ်သင်ယူမှုတွင်လိုငွေပြမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။56 ပုံမှန်ဆုလာဘ်များသင်ကြားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအနေဖြင့်မျှော်လင့်မထားသောဆုလာဘ်များ (ရလဒ်အဆင့်) ကိုတုန့် ပြန်၍ တုန့်ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်လာသည်။57 ဤရွေ့ကားအချက်ပြမှုများခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြမှုများကိုကိုယ်စားပြုတယ်။57 သင်ယူမှုကာလအတွင်းထိုအချက်ပြမှုများသည်ဆု (မျှော်လင့်ချက်အဆင့်) ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။57 မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထံမှပစ္စည်းသုံးစွဲမှုရောဂါကာလအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းလျှော့ချခြင်းသည်သင်ယူမှုလိုငွေပြမှုကိုထင်ဟပ်စေပြီးအကျိုးရလဒ်များကိုခန့်မှန်းရာတွင်အမှားတစ်ခုရှိနိုင်သည်။58 အနာဂတ်ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်မထားနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်မြဲမြံသောခန့်မှန်းအမှားများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။58 ၎င်းတို့သည်တိကျသောအမှားများကို“ မမျှော်လင့်ဘဲ” ရရှိသောဆုလာဘ်များအဖြစ်ဖော်ပြသောကြောင့်ဆုလာဘ်၏အသိပေးချက် / ရလဒ်အဆင့်တွင်မြင့်မားသောကိုယ်ဝန်ဆောင်လှုပ်ရှားမှုများကိုရှင်းပြသည်။ အထက်ပါသက်သေအထောက်အထားများအရမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသောပစ္စည်းဥစ္စာသုံးစွဲမှုရောဂါနှစ်ခုလုံးတွင် ပိုမို၍ ကောင်းမွန်သောဆုလာဘ်သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ရှိသည်။ အကျိုးဆက်ရလဒ်အဆင့်တွင်ချို့တဲ့သော NaC ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပြသသောဆယ်ကျော်သက်များသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစတင်သုံးစွဲပါက၎င်းတို့၏ ဦး နှောက်သည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်အလားတူစွာပြုမူနေသောကြောင့်ဆုလာဘ်ရလာဒ်အဆင့် / ချို့ယွင်းမှုရှိသောဆုလာဘ်သင်ယူမှုကိုပြသသောဆယ်ကျော်သက်များသည် ပို၍ စွဲလမ်းနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည် ရောဂါ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်သိသိသာသာထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းလာခြင်းကလည်းဤကာလအတွင်းတွေ့မြင်ရသည့်အာရုံခံစားမှု - ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းကိုတိုးများလာစေသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် PFC ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ကြာရှည်စွာဖြစ်ပေါ်ပြီးဆယ်ကျော်သက်နှောင်းပိုင်းတွင်အဆုံးသတ်သည်။59 PFC ရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှတားဆီးခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်းစသည့်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းများကိုတိုးမြှင့်သည်။60 ဒါကအာရုံခံစားမှု - ရှာဖွေမှုသည်လူကြီးချဉ်းကပ်မှုအပေါ်အဘယ်ကြောင့်လျော့နည်းကြောင်းရှင်းပြရန်ကူညီသည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် Impulsivity အုပ်ချုပ် neurocircuitry ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်တိုးပွားစေနိုင်သည့်ဒုတိယအပြုအမူမှာထကြွလွယ်သောစိတ်ဖြစ်သည်။ Impulsivity ဆိုသည်မှာရေရှည်အကျိုးဆက်များကိုမစဉ်းစားဘဲအလိုဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဖြစ်သည်61 နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းကန ဦး မြင့်မားသည်။ ၎င်းသည်သိပ္ပံနည်းကျထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းခြင်းကြောင့် PFC တွင်ရင့်ကျက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Puls ရင့်လာသည်နှင့်အမျှ Impulsivity သည်အလယ်အလတ်အရွယ်ကလေးဘဝမှလူကြီးဘဝသို့ကျဆင်းသွားသည်။5
impulsivity အပေါ်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်သည့် PFC ၏အခန်းကဏ္widelyကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုသည်။ သို့သော် NaC သည်အောက်ခြေမှဖက်သို့ပါ ၀ င်နိုင်သည်ဟုညွှန်ပြချက်များရှိသည်။62 ပထမ ဦး စွာ NaC-core သည် impulsivity ကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အရေးကြီးသည်။ အချို့သောစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများတွင်အစားအစာကိုကန့်သတ်ထားသောဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များအားနှောင့်နှေးပြီးနောက်4အစားအစာလုံးလေးများကိုပို့ဆောင်သည့်လီဗာနှင့်အစားအစာလုံးလေးတစ်ချပ်ကိုချက်ချင်းပို့ပေးသည့်လီဗာအကြားရွေးချယ်မှုကိုပေးခဲ့သည်။ NaC-core ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအဆိပ်များတွေ့ရှိမှုကြောင့်ကြွက်များ၏နှောင့်နှေးနေသောပိုမိုကြီးမားသောဆုလာဘ်ကိုရွေးချယ်ရန်စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေသည်။63 ဤရွေ့ကားဒေတာအကြံပြု NaC-core ကို Impulsivity ကိုထိန်းညှိအတွက်အခန်းကဏ္ plays ကြောင်းဖော်ပြသည်။
နောက်ထပ်လေ့လာမှုများ dopaminergic ဂီယာဤစည်းမျဉ်းယန္တရားများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ Besson et al သည် dopamine D ၏အသုံးအနှုနျးကိုတိုင်းတာရန် In-situ Hybrid ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်2မြင့်မားသော impulsivity နှင့်အနိမ့် Impulse ကြွက်များ၏ ဦး နှောက်ထဲမှာ - receptor အဆင့်ဆင့်။64 မြင့်မားသော impulsivity ကြွက်များတွင် dopamine D အဆင့်နိမ့်ခဲ့သည်2အနိမ့် impulsivity ကြွက်ထက် mesolimbic လမ်းကြောင်းအတွက် -receptor mRNA ။ စာရေးသူသည် D ကိုထိုးထွင်းသိမ်စေသည့်ကြွက်များကိုထိုးသွင်းသောအခါ၎င်းကိုပိုမိုနီးကပ်စွာလေ့လာခဲ့သည်2/D3- NaC-core သို့မဟုတ် shell သို့ antagonist -receptor နှင့် 5-choice တစ်ခု၏အမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်ကိုတိုင်းတာသည်။65 NaC-core ပြုတ်ရည်များသည်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးပြီး NaC-shell ပြုတ်ရည်များသည်ထိုးထွင်းမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ အတူတူဤတွေ့ရှိချက် impulsivity ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် accumbal dopamine ဆိုလို။
dopaminergic ဂီယာအပြင် NaC အတွင်းရှိ opioidergic transmission သည် impulsivity ကိုထိန်းညှိရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။ Olmstead et al သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ MOR နှင့် DOR နောက်ကောက်ကြွက်များကိုနှာခေါင်းရှုံ့ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးမော်တာကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။66 MOR နောက်ကောက်ကြွက်များသည်မော်တာကိုလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းအားလျော့နည်းစေပြီး DOR နောက်ကောက်ကြွက်များသည်ထိန်းချုပ်မှုများထက်ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားတတ်သည်။ ဤအချက်အလက်များအရ MOR အချက်ပြခြင်းသည် impulsivity ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး DOR အချက်ပြမှုက၎င်းကိုလျော့ချစေသည်။ NaC-core သည် MORs များစွာကြွယ်ဝသောကြောင့်ဤနေရာတွင် opioidergic transmission သည်ဤလေ့လာမှုတွင်တွေ့ရသောသက်ရောက်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ NaC-core သို့မဟုတ် shell အတွင်း MOR-antagonists များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင်ထိုးထွင်းမှုကိုတိုင်းတာခြင်းသည်ဤဒေသရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအတည်ပြုနိုင်သည်။ သို့သော်လက်ရှိသက်သေအထောက်အထားများကမက်လုံးနှင့်ဟိုက်ဒြိုဂျင်ဖြစ်စဉ်ကိုဖျန်ဖြေပေးသည့်အလွှာများ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထပ်တူကျအောင်အကြံပြုနေဆဲဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်မက်လုံးများနှင့်ဟိုက်ဒရိုနိုက်အလွှာများကကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးသည့်အလွှာများ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ထပ်တူကျမှုသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပိုမိုရှာဖွေရန်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်တွေ့ရသောတိုးတက်လာအောင်လုပ်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။ ထို့အပြင် NaC အတွင်းရှိယန္တရားများ၏ hyperactivity ကို PFC ရှိနုသိသောသိမှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့်မျှတမှုမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ စနစ်နှစ်ခုစလုံးသီအိုရီသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်တွေ့မြင်ရသည့်အာရုံခံစားမှု - ရှာဖွေခြင်းနှင့်ထကြွလွယ်သောစိတ်သဘောကိုဖော်ပြသည်။ သို့သော်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ဤစရိုက်များ၏အဆင့်များ၌တစ် ဦး ချင်းအကြားကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ အချို့လူငယ်များသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်သန်းစဉ်သူတို့၏ခံစားချက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်စိတ်မ ၀ င်စားမှုအဆင့်များ၌လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲမှုများကိုကြုံတွေ့ရပြီးအခြားသူများမှာမူအသက်အရွယ်နှင့်အတူဤစရိုက်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းထားသည်။5 ဤအစရိုက်များအရွယ်ရောက်ပြီးသူမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်း endophenotypes များမှာဤသည်သိသာသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုအတွက်ဆုလာဘ်ပရိုဖိုင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌ဤစရိုက်များရှိနေခြင်းအကြားဆက်စပ်မှုများသည်အရွယ်ရောက်စအရွယ်တွင်စွဲလမ်းမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကကျသောအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
အစောပိုင်းစတင်ခြင်း (ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်) မှစွဲလမ်းမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်ယန္တရားများ
ဆယ်ကျော်သက်အများစုသည်ရေရှည်ပြproblemsနာများမရှိဘဲမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်သန်းကြရသော်လည်းသိသိသာသာအချိုးအစားသည်နောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေရှိသည်။ 14 နှစ်မတိုင်မီပစ္စည်းဥစ္စာကိုစတင်အသုံးပြုသောဆယ်ကျော်သက်များသည်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုအတွက်အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်ရှိသည်။67 ထို့ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအရထိခိုက်လွယ်သောကာလကိုကိုယ်စားပြုပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးစတင်သုံးစွဲခြင်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်စေနိုင်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲမှုကိုအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များရှိသော်ငြားဆက်လက်မသောက်မနေရမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဟုသတ်မှတ်သည်။68 အပြုအမူသည်အစပိုင်းတွင်ရည်မှန်းချက်ထားရှိသော်လည်းထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးမှုသည်ရောဂါ၏အဓိကလက္ခဏာဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုကိုအဓိကလက္ခဏာသုံးရပ်ဖြင့်ဖော်ပြနိုင်သည်။ မက်လုံးပေးအာရုံခံစားမှု, အလေ့အထဖွဲ့စည်းခြင်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ ပထမတစ်ခုအနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ခြင်းသည်မက်လုံးဖြစ်စေသည့်ဖြစ်စဉ်များကိုသိသာစေသည်။ NaC သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွဲစပ်မှုများကိုတုံ့ပြန်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီး၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ hedonic allostasis လည်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများသည်ပေါ်ပေါက်လာသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်အခြေအနေများကိုလျော့ပါးစေရန်ဆေးဝါးများကိုဆက်လက်သုံးစွဲနေကြသည်။ ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည့်အပြုအမူမှအချိန်အလိုက်အလေ့အထအပြုအမူများသို့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဤကာလအတွင်းထကြွလွယ်သောအပြုအမူများတိုးပွားလာသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မသန်မစွမ်းသောမက်လုံးပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အမူအကျင့်များအားပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်မက်လုံးများအလေ့အထကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤမက်လုံးသည်အလေ့အထကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူမူးယစ်ဆေးစွဲမှုတွင်တွေ့ရသောမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုကိုဖျန်ဖြေပေးသည်။68
အောက်ဖော်ပြပါကဏ္ above သည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူစွဲလမ်းမှု၏အဓိကလက္ခဏာသုံးရပ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစရိုက်များအကြားဆက်နွယ်မှုများကိုဆွေးနွေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤသို့ပြုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မှစ၍ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည့်နောက်ပိုင်းတွင်စွဲလမ်းနေသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားနည်းခြင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောယန္တရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
အာရုံခံစားမှုတစ်ခုထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှုကြောင့်လှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်မထွက်ရဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြသည်။ အထောက်အထားများအရမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲမှုတွင် mesolimbic dopamine စနစ်ကိုအာရုံခံစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကြွက်များတွင်အမ်ဖီတမင်း၏ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းစမ်းသပ်မှုများမှထုတ်သောဆေးများသည် mesolimbic တည်ဆောက်ပုံများတွင်အာရုံခံဆဲလ်များ၏ပစ်ခတ်မှုပုံစံများကိုတိုးပွားစေသည်။32 ဤတွေ့ရှိချက်များကိုလူသားများတွင်ပုံတူကူးယူပြီးအမ်ဖီတမင်း၏ထပ်ခါတလဲလဲဆေးများသည် NaC တွင် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုအထိခိုက်စေပါသည်။ နောက်တစ်နှစ်အကြာတွင်အမ်ဖီတမင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစိန်ခေါ်မှုကြောင့် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုတိုးလာသည်။69 ဤသည် sensitization ၏သက်ရောက်မှုများရေရှည်တည်တံ့ဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် NaC, pavlovian လှုံ့ဆော်မှုများသည်ဆာပတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံဖြည့်တင်းရန်အချိန်ဇယားအရ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုအသိမှတ်ပြုခြင်းသည် cue-ထိန်းချုပ်ထားသောမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုကိုဖျန်ဖြေပေးရန်ဖြစ်သည်။ ကြွက်များတွင် dopamine receptor antagonists သည် cue ထိန်းချုပ်ထားသောကိုကင်းကိုရှာဖွေသည်။70 ထို့ကြောင့် NaC ရှိ dopaminergic အာရုံခံဆဲလ်များ၏အလွန်အကံျွခံစားမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွဲစပ်မှုများကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လိုချင်သောရောဂါများကို ဦး တည်စေသည့်ပုံမှန်မဟုတ်သောသွင်းအားစုအတွက်တာဝန်ရှိပုံရသည်။ ဤသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမူးယစ်ဆေးစွဲ၏မက်လုံးပေး sensitization သီအိုရီဖြစ်ပါတယ်။32
အရွယ်ရောက်ပြီးသူမူးယစ်ဆေးစွဲမှုတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအလွန်အကျွံလိုချင်ခြင်းသည်အချို့သောမြီးကောင်ပေါက်များ၌တွေ့ရသောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးထိခိုက်မှုမဖြစ်နိုင်သေးသော်လည်းယခင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည့်အတိုင်း၊ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌, ဒီစနစ်၏ hyperactivity မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲဖို့စတင်တစ် ဦး ခန့်မှန်းသောအာရုံခံစားမှု - ရှာကြံ mediates ။11 ထို့ကြောင့်ဤစရိုက်လက္ခဏာမြင့်မားကြောင်းပြသသောဆယ်ကျော်သက်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးစတင်သုံးစွဲရန်အန္တရာယ်ပိုများလာသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုမြင့်မားသောဆယ်ကျော်သက်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုစတင်ရန်အလားအလာပိုများသည်၊ အကြောင်းမှာ hyperactive salience circuitry သည်မက်လုံးများဖြစ်စဉ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးအပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။49
အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးစတင်သုံးစွဲမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကိုသူကိုယ်တိုင်တီထွင်ရန်အန္တရာယ်မရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ အထောက်အထားများအရအချို့သောအခြေအနေများတွင်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းသည်အကာအကွယ်ပေးသည့်အချက်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။9 သို့သော်၎င်းသည်အဘယ်အရာကိုဖျန်ဖြေပေးသနည်း။ အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းပုံစံကို (SSS-V) ကို အသုံးပြု၍ လူတို့တွင်တိုင်းတာသည်။ အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း၏အတွေ့အကြုံရှာဖွေခြင်းနှင့်ပျင်းလွန်းခြင်း - လွယ်ကူစွာထိခိုက်လွယ်ခြင်းအစုအဝေးများသည်ကြွက်များတွင်အသစ်စက်စက်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘာသာပြန်ကျမ်းဖြစ်သည်၊ ကိုကင်းကိုမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ပြုသည့်ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအတင်းအကျပ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတိုးတက်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်လက္ခဏာဖြစ်သည်။71 စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရှာဖွေခြင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပိုးမွှားသန့်စင်ခြင်းအနိမ့်အမြင့်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစတင်ခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့်ကျယ်ပြန့်သောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည့်ခြုံငုံအာရုံခံစားမှု - ရှာဖွေသည့်လက္ခဏာနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။71 တစ် ဦး က dissociation ထို့ကြောင့် compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသောက်သုံးဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏အန္တရာယ်ဆယ်ကျော်သက်မြင့်မားအပေါ်ဂိုးသွင်းသော subscales အပေါ်မူတည်သည်အဘယ်မှာရှိအာရုံ - ရှာကြံဆောက်လုပ်ရေးအတွင်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှု၏နောက်ထူးခြားသည့်လက္ခဏာတစ်ခုမှာအလေ့အထကိုတိုးပွားစေသည်။68 အရွယ်ရောက်ပြီးသူပစ္စည်းဥစ္စာသုံးစွဲမှုရောဂါတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အပြုအမူသည်ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်ခြင်းမှသာမန်ဖြစ်ခြင်းသို့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားသည်။ ကိုကင်းနှင့်အရက်ကိုရှာဖွေသည့်အပြုအမူသည်အစကန ဦး ကြွက်များတွင်ရလဒ်များဆိုးရွားလာခြင်းအပေါ်အထိခိုက်မခံသောအချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အချိန်ပို, အပြုအမူလှုံ့ဆော်မှုခညျြနှောငျနှင့်တန်ဖိုးတန်ဖိုးကိုခံနိုင်ရည်ဖြစ်လာသည်။72,73 DLS အတွင်းရှိ Dopamine ဂီယာသည်ဤလှုံ့ဆော်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတုန့်ပြန်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ Everitt et al သတင်းပို့ချက်အရကိုကင်းသည်ကြာရှည်စွာထိတွေ့ပြီးနောက် cue ထိန်းချုပ်ထားသောကိုကာကိုလာရှာဖွေစဉ်အတွင်း dopal striatum တွင် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုတိုးလာခဲ့သည်။74
DLS သည် ventral striatum, midbrain နှင့် dorsal striatum အကြားတည်ရှိသည့် striato-nigro-striatal loops များမှတဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်သည်။ Belin & Everitt မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။75 Stats-nigro-striatal connection ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေဖို့အတွက် contraateral DLS ကို NaC core ရဲ့တဖက်သတ်တွေ့ရှိမှုနဲ့ dopamine antagonist တွေရဲ့ထိုးသွင်းမှုတွေကိုကြွက်တွေပေးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကိုင်တွယ်ကြွက်များတွင် cue -controlled မူးယစ်ဆေးရှာကြံအပြုအမူလျော့နည်းသွားသည်။ ဤအချက်က striato-nigro-striatal loops များသည် cue-control အပြုအမူကိုထိန်းသိမ်းပြီး၎င်းသည်အပြုအမူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို DLS ထဲမှာ dopaminergic transmission ကြောင့်ကမကထပြုထားတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသောမူးယစ်ဆေးစွဲမှုတွင်ပုံမှန်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသည့်အပြုအမူသည်နောက်ဆုံးတွင်မဖြစ်မနေဖြစ်လာသည်။68 Impulsivity သည်ကိုကင်းကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်မှီခိုမှုအားဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်သော endophenotype ဖြစ်သည်။10 ဤသည်ကဤစရိုက်ကိုမြင့်မားသောဆယ်ကျော်သက်များအားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုတားဆီးနှောက်ယှက်သောအပြုအမူများဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်သည့်အန္တရာယ်မြင့်မားစေသည်။
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာအတွေ့အကြုံရှာဖွေခြင်းနှင့်ပျင်းခြင်း - လွယ်ကူစွာထိခိုက်လွယ်သော subscales များနှင့်ဆက်နွယ်သော compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအန္တရာယ်တိုးလာမှုသည်ဤ subscales များနှင့်သက်ဆိုင်သောအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ Molander et al သည်အသစ်သောဓာတ်ပြုမှုနှင့် ဦး စားပေးမှုအပေါ်မြင့်မားသော impulsivity ကြွက်များကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။76 high-impulsivity ကြွက်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ပိုမိုနှစ်သက်ပြသခဲ့သည်နှင့်အနိမ့် Impulsivity ကြွက်ဟာယန္တရား၏အကျွမ်းတဝင်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ပိုမိုအချိန်ဖြုန်းဖို့တော်မှာသော်လည်း, ဝတ္ထု setting တွင်ရှာဖွေစူးစမ်းအပြုအမူစတင်ရန်ပိုမိုမြန်ဆန်ခဲ့ကြသည်။ ဤအချက်ကမြင့်မားသောစိတ်မ ၀ င်စားသောကြွက်များသည်အတွေ့အကြုံရှာဖွေခြင်းနှင့်ပျင်းခြင်းကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်လွယ်ခြင်းတို့အပေါ်တွင်လည်းမြင့်မားသည်ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်နွယ်သော sensation-seek subscales အပေါ်မြင့်မားသောတိုင်းတာမှုများသည် sensation-seeking သည်အမြဲတမ်းအကာအကွယ်ပေးသည့်အချက်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြနိုင်သည်။
အကျဉ်းချုပ်အနေဖြင့်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း၏ subscales၊ ပျင်းလွယ်လွယ်ခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှာဖွေခြင်းတို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏နောက်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။71 Impulse သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏နောက်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လည်းဆက်နွယ်နေသည်။10 သို့သော်စိတ် ၀ င်စားစရာမှာအထက်ဖော်ပြပါ sensation-search and impulsivity ၏အထက်ဖော်ပြပါ subscales များသည်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။76 ဤသည်ဤအမူအကျင့်စရိုက်များဒါ discrete မဟုတ်ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ neurobiologically မြင်သောမက်လုံးနှင့် hedonic ဖြစ်စဉ်များအကြားမှုန်ဝါး 49,66 အမူအကျင့်လက္ခဏာ၏အာရုံ - ရှာကြံခြင်းနှင့် Impulse အကြားနယ်နိမိတ်မှုန်ဝါးလည်းမရှိအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌လည်းအပြုအမူရှုမြင်သည်။71 ၎င်းသည်အနံ့ဆိုးများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောဤကြယ်တာရာကိုအလွန်အမှတ်ရစေသောမြီးကောင်ပေါက်များသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဘဝတွင်စွဲလမ်းမှုကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။ပုံ 2).
မက်လုံးနှင့် hedonic ဖြစ်စဉ်များအကြားမှုန်ဝါး dissociation ။ အပြုအမူလက္ခဏာရဲ့အာရုံ - ရှာကြံ (အက်စ်အက်စ်) နှင့် Impulse (I) အကြားနယ်နိမိတ်၏မှုန်ဝါးလည်းမရှိအဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်အတွက် neurobiologically မြင်သောမက်လုံးများနှင့် hedonic ဖြစ်စဉ်များအကြားမှုန်ဝါးကိုလည်းအပြုအမူမြင်သည်။ ၎င်းသည်အနံ့ဆိုးများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောဤကြယ်တာရာကိုအလွန်အမှတ်ရစေသောမြီးကောင်ပေါက်များသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဘဝတွင်စွဲလမ်းမှုတိုးပွားလာနိုင်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူမူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏နောက်ဆုံးလက္ခဏာလက္ခဏာမှာသိမှုထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းသွားသည်။68 PFC သည်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုစစ်ဆေးသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် PFC လုပ်ဆောင်ချက်၌ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာများပါဝင်သည်။ Goldstein et al အစီရင်ခံချက်အရမူးယစ်ဆေးစွဲသူများအတွက် PFC မီးခိုးရောင်ပစ္စည်းသိပ်သည်းဆနှင့်အထူလျှော့ချခြင်းသည်ပြင်းထန်မှုနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုရောဂါနှင့်ပိုဆိုးသောအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။77 ဤသက်ရောက်မှုကို asstinst ခြောက်နှစ်ကြာပြီးနောက်တွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဤအချက်အလက်များအရမူးယစ်ဆေးဝါးများသည် PFC ကိုထိခိုက်စေသည့်အရာသည်နောင်ဘဝတွင်စွဲလမ်းမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သက်ရောက်မှုများ၏ရှည်လျားသောသဘောသဘာဝကိုလည်း PFC မီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမူမမှန်မူးယစ်ဆေးဝါးများမသောက်မီပစ္စုပ္ပန်ကြိုတင်စွန့်ပစ်ခြင်းအားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌, PFC လုပ်ငန်းလည်ပတ်လည်း sub- အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ PFC ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်လူကြီးများအထိရှည်လျားသည်။ ထို့ကြောင့်သိမှုထိန်းချုပ်မှုသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်လျော့နည်းသွားသည်။ ဤသည်သိသိသာသာထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းသွားအရွယ်ရောက်စလယ်ပိုင်းမှာထကြွလွယ်ခြင်းနှင့်အာရုံ - ရှာကြံအတွက်တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။ စရိုက်နှစ်ခုလုံးမြင့်မားသောဆယ်ကျော်သက်များသည်နောက်ပိုင်းတွင်အသက်တာတွင်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မှာ - အန္တရာယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူချဉ်းကပ်မှုအပေါ်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်သိမြင်ထိန်းချုပ်မှုမြှင့်တင်သောလူကြီးအတွက်စွဲဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်မည်နည်း အလားအလာရှိသောသက်သေသာဓကများမှာစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်သောပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက် HOPE အစီအစဉ်၏စမ်းသပ်မှုမှဖြစ်ပြီး၊ များစွာသောသူတို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူများဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သူများသည်၎င်းတို့အားကျပန်းမူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆေးမှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်မလိုကိုစစ်ဆေးရန်စင်တာသို့နေ့စဉ်ဖုန်းခေါ်ရမည်။ တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်မိမိတို့၏အပြုအမူများကိုစောင့်ကြည့်ပြီးဗဟိုသို့နေ့စဉ်တက်ကြွစွာဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ HOPE အစီအစဉ်ကိုကျပန်းတာဝန်ကျေပွန်မှုမှတစ်ဆင့်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ 13% ၏အဖွဲ့ ၀ င်များသည်ထိန်းချုပ်မှု၏ 46% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သူတို့၏မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆေးမှုကိုမအောင်မြင်ပါ။ ရလဒ်များအပေါ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုတိုးမြှင့်နိုင်သည့်စွမ်းအားကိုပြသသောကြောင့်ဤအချက်အလက်များသည်အလားအလာကောင်းများရှိသည်။48
လန်ဒန်ရှိ 732 အလယ်တန်းကျောင်းမှကလေးများကိုကျပန်းထိန်းချုပ်ထားသည့်ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုမှဤအထောက်အပံ့ကိုထပ်မံရရှိသည်။78 စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအတွက်အခြားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအန္တရာယ်အချက်များအပေါ်အလွန်အမင်းဂိုးသွင်းသူများကိုထိန်းချုပ်သူအုပ်စုသို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့တွင်တာဝန်ပေးအပ်သည်။ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသည်ရည်မှန်းချက်ကိုချမှတ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှုန်းပိုမိုမြင့်မားပြီးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအဖွဲ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနှစ်နှစ်နောက်ဆက်တွဲစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအဖွဲ့တွင်အသုံးပြုသည့်ဆေးဝါးများပိုမိုသုံးစွဲခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အန္တရာယ်ကျရောက်သောဆယ်ကျော်သက်များတွင်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးတက်စေခြင်းအားဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာသုံးစွဲမှုရောဂါစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်တားဆီးနိုင်သည်ဟူသောအယူအဆကိုထပ်မံထောက်ခံသည်။ ဤအစီအစဉ်တွင်မြီးကောင်ပေါက်များ၏နှစ်ရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှုန်းကိုအကဲဖြတ်ရန်ရေရှည်လေ့လာမှုများပြုလုပ်သင့်သည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌ဆုလာဘ်ကိုထိန်းချုပ်သည့်ယန္တရားများအားအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကမက်မိုရီယမ်အလွှာများ၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်မက်ဆီဒွန်ဖြစ်စဉ်များကိုကြားသိမြင်နိုင်ရန်လုပ်ဆောင်မှုများအကြားထပ်တူကျအောင်ပြုလုပ်ထားသည် dopaminergic နှင့် opioidergic ဖြစ်စဉ်များနှစ်ခုလုံးအပေါ်မှီခိုအားထားနေရသောမက်လုံးပေးတိုက်ထုတ်မှုပိုမိုအားကောင်းလာခြင်းသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်တွေ့မြင်ရသည့်ပိုမိုမြင့်မားသောအာရုံခံစားမှု - ရှာဖွေမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ဤစရိုက်များသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဘ ၀ တွင်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်သော endophenotypes၊ ထို့ကြောင့်ထိုစရိုက်လက္ခဏာနှစ်ခုလုံးတွင်မြင့်မားသောဆယ်ကျော်သက်များသည်နောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်ရှိသည်။ ဤကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သောစရိုက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏ဆက်စပ်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အနာဂတ်သုတေသနကိုအာရုံစိုက်သင့်သည့်အဓိကနယ်ပယ်အချို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
ပထမအချက်မှာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်စိတ်မ ၀ င်စားမှုကိုအဓိကအားဖြင့်ဆားငံရေစိမ့် ၀ င်မှုစနစ်အားထိန်းချုပ်ထားသောကြောင့်လူကြီးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၌ကုသမှုကိုဤနေရာတွင် ဦး တည်နိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကုထုံးသည်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သောကုသမှုနှစ်မျိုးကိုသာအာရုံစိုက်သင့်သည်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သောမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစရိုက်လက္ခဏာများကိုတွေ့ရှိခြင်းသည်အန္တရာယ်မြင့်မားသောလူငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်သောကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များကိုဖွင့်ပေးသည်။ HOPE နှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုအစီအစဉ်၏သက်သေအနေဖြင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုကိုအားဖြည့်ပေးသည့်ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ကုသမှုကိရိယာများအနေဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသူများအတွက်စိတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်မ ၀ င်စားမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများအတွက်လက်ရှိကုသမှုရလဒ်များမှာညံ့ဖျင်းသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာများတွင်ဖြစ်ပွားသောပြင်ပစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအသိုင်းအဝိုင်းသို့ပြန်လာသည့်အခါမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကိုပြန်လည်မတားဆီးနိုင်ပါ။ ထို့အပြင် GSK1521498 ကဲ့သို့သောဆေးဝါးများသည်အပြုအမူအားရှာဖွေခြင်းကိုလျှော့ချသည့်အနေဖြင့်အရက်သောက်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အေဂျင်စီများပြန်ပေးခြင်းသည်အဓိကကျသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နည်းလမ်းများသည်တက်ကြွသောဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီအားမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သော်လည်းထိန်းချုပ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဤဒေသများနှင့် ပတ်သက်၍ အနာဂတ်သုတေသနသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသောမူးယစ်ဆေးစွဲသူများအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကုသမှုနည်းလမ်းများကိုအဆုံးမသတ်နိုင်သော်လည်း၊ ဤသုတေသနသည်ဗဟုသုတအခြေခံကိုတိုးချဲ့ပြီးလက်တွေ့ကျသောဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်လာလိမ့်မည်။
Dr. David Belin အားပံ့ပိုးမှုနှင့်လမ်းညွှန်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဆောင်းပါး၏ဒီဇိုင်း၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှု၊ ရေးသားခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းတို့တွင် FK, OO နှင့် RM တို့ပါ ၀ င်သည်။ စာရေးသူအားလုံးသည်အလုပ်၏တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်သမာဓိရှိမှုအားလုံးအတွက်တာဝန်ယူရန်သဘောတူသည်။
1. Kloep M, Hendry LB, Taylor R, Stuart-Hamilton I. ကျန်းမာရေးနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် - ဘဝသက်တမ်း - မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှအစောပိုင်းအရွယ်ရောက်အထိဖွံ့ဖြိုးရေး - အသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက်စနစ်တကျချဉ်းကပ်မှု။ စိတ်ပညာစာနယ်ဇင်း: 2016: 74-96 ။ [Google Scholar]
2. Steinberg LD ။ ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်ထဲမှာ လူငယ်ဘဝ။ နယူးယောက်: McGraw-Hil; 2010 ။ [Google Scholar]
3. Coleman JC ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏သဘောသဘာဝ။ UK: Routledge; 2011 ။ [Google Scholar]
4. Thompson က JL, နယ်လ်ဆင် AJ ။ အလယ်တန်းကလေးဘဝနှင့်ခေတ်သစ်လူ့ဇစ်မြစ်. Hum နတ်။ 2011;22(3):249–280. doi:10.1007/s12110-011-9119-3 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. Harden KP, Tucker-Drob EM ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်စိတ်မ ၀ င်စားခြင်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများ - စနစ်နှစ်မျိုးသုံးမော်ဒယ်အတွက်နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထား. dev Psychol။ 2011;47(3): 739-746 ။ Doi: 10.1037 / a0023279 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Urošević S, Collins P, Muetzel R၊ Lim K, Luciana M. အပြုအမူချဉ်းကပ်မှုစနစ် sensitivity နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအတွက် longitudinal အပြောင်းအလဲများကို. dev Psychol။ 2012;48(5): 1488-1500 ။ Doi: 10.1037 / a0027502 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
7. American Psychiatric Association ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်။ Philadelphia တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံ။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း၊ 2013 ။ [Google Scholar]
8. WHO က။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအလွဲသုံးစားမှု။ မှရနိုင်သည် http://www.who.int/topics/substance_abuse/en/။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသော 2016 April22, 2017 ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
9. Ersche KD၊ ဂျုံးစ် PS၊ Williams GB၊ Smith DG၊ Bullmore ET, Robbins TW လှုံ့ဆော်မှုမှီခိုမှု၏မိသားစုအန္တရာယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထူးခြားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များနှင့်လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများ. Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013;74(2): 137-144 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2012.11.016 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
10 ။ Belin: D, Mar AC၊ Dalley JW, Robbins TW, Everitt BJ ။ အမြင့် Impulse compulsive ကင်း-ဆည်းပူးနေမှ switch သည်ခန့်မှန်းထားသည်. သိပ္ပံ။ 2008;320(5881): 1352-1355 ။ Doi: 10.1126 / science.1158136 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
11 ။ Belin: D, Belin-Rauscent A, Everitt BJ, Dalley JW ။ preclinical သုတေသနထံမှထိုးထွင်းသိမြင်: စွဲအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် endophenotypes ၏ရှာဖွေရေးအတွက်. မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2016;15(1): 74-88 ။ Doi: 10.1111 / gbb.12265 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
12 ။ Berridge KC, Kringelbach ML ။ ဦးနှောက်အတွက်အပျြောအပါးစနစ်များ. အာရုံခံဆဲလျ။ 2015;86(3): 646-664 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2015.02.018 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
13 ။ Hazel N ကို လူငယ်တရားမျှတမှု Cross- အမျိုးသားရေးနှိုင်းယှဉ်; 2008 ။ မှရနိုင်သည် www.yjb.gov.uk။ ဝင်ရောက်Aprilပြီ 1, 2019 ။
14 ။ Spanagel R. စွဲ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ. ဆွေးနွေးမှုများကို Clin neuroscience။ 2017;19(3): 247-258 ။ မှရနိုင်သည် http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29302222။ ဝင်ရောက်Aprilပြီ 1, 2019 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [Google Scholar]
15 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ Dopamine နှင့်ဆုလာဘ်: နှစ်ပေါင်းများစွာအပေါ် anhedonia အယူအဆ. Neurotox Res။ 2008;14: 169-183 ။ Doi: 10.1007 / BF03033808.Dopamine [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
16 ။ Telzer EH Dopaminergic ဆုလာဘ် sensitivity ကိုဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်နိုင်သည် ventral striatum activation ၏ယန္တရားအပေါ်အသစ်တစ်ခုကိုရှုထောင့်. dev Cogn neuroscience။ 2016;17: 57-67 ။ Doi: 10.1016 / j.dcn.2015.10.010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
17 ။ Merrer JLE ။ ဦး နှောက်အတွင်းရှိ opioid စနစ်ဖြင့်ထုတ်ယူခြင်းအတွက်ဆုလာဘ်. Physiol ဗျာ 2009:1379–1412. DOI:10.1152/physrev.00005.2009 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
18 ။ Alcaro A, Huber R ကို, Panksepp ဂျေ အဆိုပါ mesolimbic dopaminergic စနစ်၏အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို: တစ် ဦး ကိုထိခိုက် neuroethological ရှုထောင့်. ဦးနှောက် Res ဗြာ။ 2007;56(2): 283-321 ။ Doi: 10.1016 / j.brainresrev.2007.07.014 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
19 ။ Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္isမှာ - hedonics၊ သင်ယူခြင်း၊ ဦးနှောက် Res ဗြာ။ 1998;28:308–367. doi:10.1016/S0165-0173(98)00019-8 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
20 ။ Wassum KM, Cely IC, Balleine BW, Maidment NT ။ အဆိုပါ basolateral amygdala အတွက် Opioid အဲဒီ receptor activation တိုး၏သင်ယူမှုကိုဖျန်ဖြေပေမယ့်အစားအစာဆုလာဘ်၏မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုအတွက်လျော့နည်းသွားသည်မဟုတ်. J ကို neuroscience။ 2011;31(5):1591–1599. doi:10.1523/JNEUROSCI.3102-10.2011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
21 ။ Older J ကို, Milner P. ကြွက် ဦး နှောက်၏အခြားဒေသများနှင့် septal ofရိယာ၏လျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှုဖြင့်ထုတ်လုပ်အပြုသဘောအားဖြည့်. J ကို comp Physiol Psychol။ 1954;47: 419-427 ။ Doi: 10.1037 / h0058775 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
22 ။ ဟာနန်ဒက်ဇ်, G, Rajabi H ကို, Stewart က J ကို, Arvanitogiannis တစ် ဦး က, Shizgal P. ရူပဗေဒအကြားကာလတိုအတွင်း ဦး နှောက်ကိုနှိုးဆွပေးသည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ကြို။ မခန့်မှန်းနိုင်သည့်အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း Dopamine အသံသည်အလားတူတိုးပွားသည်. ပြုမူနေဦးနှောက် Res။ 2008;188(1): 227-232 ။ Doi: 10.1016 / j.bbr.2007.10.035 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
23 ။ di Chiara, G, Imperato အေ လူသားမြားသဖွငျ့စော်ကားမူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျား၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်. proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1988;85(ဇူလိုင်လ): 5274-5278 ။ Doi: 10.1073 / pnas.85.14.5274 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
24 ။ Pfaus JG, Damsma, G, Nomikos GG, et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်ကြွက်များတွင်အမျိုးသား dopamine ကူးစက်မှုကိုတိုးစေသည်. ဦးနှောက် Res။ 1990;530(2):345–348. doi:10.1016/0006-8993(90)91309-5 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
25 ။ Hoebel BG၊ မိုနာကိုအေပီ၊ ဟာနန်ဒက်ဇ် L၊ Aulisi EF, Stanley BG, Lenard L. ကိုယ်တိုင် ဦး နှောက်ထဲသို့အမ်ဖီတမင်းဆေးထိုးခြင်း. Psychopharmacology (Berl)။ 1983;81(2): 158-163 ။ Doi: 10.1007 / BF00429012 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
26 ။ Yokel R ကို, ပညာရှိ R. ကြွက်များတွင်ဗဟို dopamine ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်သွေးကြောသွင်း amphetamine အားဖြည့်၏ attenuation. Psychopharmacology (Berl)။ 1976;48(3): 311-318 ။ Doi: 10.1007 / bf00496868 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
27 ။ Ettenberg A, Pettit HO, Bloom FE, Koob GF ။ ဘိန်းဖြူများနှင့်ကြွက်များအတွင်းကိုကင်းသွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး: သီးခြားအာရုံကြောစနစ်များအားဖြင့်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေ. Psychopharmacology (Berl)။ 1982;78(3): 204-209 ။ Doi: 10.1007 / BF00428151 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
28 ။ Castro DC, Cole SL, Berridge KC အစားအစာနှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုတွင်ဘေးထွက် hypothalamus၊ နျူကလိယ accumbens နှင့် ventral pallidum အခန်းကဏ္atic - homeostatic နှင့်ဆုတ်တိုက်ခြင်းအကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ. တပ်ဦး Syst neuroscience။ 2015;9: (ဇွန်လ): 90 ။ Doi: 10.3389 / fnsys.2015.00090 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
29 ။ Pecina S, Berridge KC, Parker LA ။ အရသာ reactivity ကိုအားဖြင့် sensorimotor ဖိနှိပ်မှုကနေ anhedonia ၏ခွဲခြာ: Pimozide အာခေါင် shift ပါဘူး. Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1997;58(3):801–811. doi:10.1016/S0091-3057(97)00044-0 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
30 ။ ဒို TG, Berridge KC, Gosnell BA ။ Morphine သည်ကြွက်များတွင် hedonic အရသာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်. Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1993;46(3):745–749. doi:10.1016/0091-3057(93)90572-B [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
31 ။ Liggins J, Pihl RO, Benkelfat C, Leyton M. dopamine augmenter l-dopa သည်ကျန်းမာသောလူ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ဓာတ်ကိုမသက်ရောက်ပါ. PLoS တစ်ခုမှာ။ 2012;7(1): 0-5 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0028370 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
32 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းမှု၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: အချို့သောလက်ရှိပြဿနာများကို. ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008;363(1507): 3137-3146 ။ Doi: 10.1098 / rstb.2008.0093 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
33 ။ Schlaepfer TE, Cohen MX, Frick C, et al ။ ဆားကစ်အားဆုချရန်နက်ရှိုင်းသော ဦး နှောက်ကိုနှိုးဆွပေးခြင်းသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောအဓိကစိတ်ကျဝေဒနာ၌ anhedonia ကိုလျော့နည်းစေသည်. Neuropsychopharmacology။ 2008;33(2): 368-377 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1301408 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
34 ။ Callesen MB, Scheel-Krüger J, Kringelbach ML, Møller A ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိသည့်စိတ်ကြွဆေးထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း. J ကို Parkinsons dis။ 2013;3(2): 105-138 ။ Doi: 10.3233 / JPD-120165 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
35 ။ Difeliceantonio AG၊ Berridge KC ။ မက်လုံးပေးသောလတ်ဆတ်မှုဖြစ်စေရန် dorsolateral neostriatum အလှူငွေ - opioid သို့မဟုတ် dopamine ဆွပေးခြင်းသည်ဆုလာဘ်တစ်ခုအားအခြားတစ်ခုထက် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိစေသည်။. EUR J ကို neuroscience။ 2016;43(9): 1203-1218 ။ Doi: 10.1111 / ejn.13220 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
36 ။ Wassum KM, Ostlund SB, Maidment NT, Balleine BW ။ ကွဲပြားသော opioid ဆားကစ်များသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဖြစ်ရပ်များ၏ဆန္ဒရှိမှုကိုဆုံးဖြတ်သည်. proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2009;106(30): 12512-12517 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0905874106 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
37 ။ ကက်စထရို DC, Berridge KC ။ နျူကလိယရှိ Opioid hedonic hotspot accucens shell - mu, delta နှင့် kappa map များသည်ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်“ လိုချင်ခြင်း” တိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်မြေပုံများ။. J ကို neuroscience ။ 2014;34(12):4239–4250. doi:10.1523/JNEUROSCI.4458-13.2014 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
38 ။ Russo SJ, Nestler EJ ။ ခံစားချက်မမှန်အတွက်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry. နတ်ဗြာ neuroscience။ 2014;14(9): 1-34 ။ Doi: 10.1038 / nrn3381.The [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
39 ။ Ziauddeen H၊ Chamberlain S၊ နာသန် P ။ hedonic နှင့် consummatory အပြုအမူအပေါ် mu-opioid receptor antagonist GSK1521498 ၏ရိုက်ခတ်မှုများ. Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012;18154: 1287-1293 ။ Doi: 10.1038 / mp.2012.154 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
40 ။ Salamone JD, Correa အမ် mesolimbic dopamine ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ဆောင်ချက်များကို. အာရုံခံဆဲလျ။ 2012;76(3): 470-485 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2012.10.021 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
41 ။ Giuliano ကို C, Robbins TW, Wille DR, Bullmore ET, Everitt BJ ။ μ-opioid receptor antagonism အားဖြင့်ရှာဖွေသောကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူကို attenuation. Psychopharmacology (Berl)။ 2013;227(1):137–147. doi:10.1007/s00213-012-2949-9 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
42 ။ Ignar DM, Goetz AS, Noble KN, et al ။ GSK1521498, ဝတ္ထု - opioid အဲဒီ receptor - select လုပ်သောပြောင်းပြန် agonist အားဖြင့်ကြွက်များတွင်အူလမ်းကြောင်းအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်း. J ကို Pharmacol Exp Ther။ 2011;339(1): 24-34 ။ Doi: 10.1124 / jpet.111.180943 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
43 ။ Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ, Baler R, Telang F. မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုတွင် dopamine ၏အခန်းကဏ္ကိုပုံဖော်ပေးခြင်း. Neuropharmacology။ 2009;56(1): 3-8 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2008.05.022 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
44 ။ Brauer LH, De Wit အိပ်ချ် မြင့်မားသောဆေးထိုး pimozide သည်သာမန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၌အမ်ဖီတမင်းသွေးဆောင်သောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုမတားဆီးနိုင်ပါ. Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1997;56(2):265–272. doi:10.1016/S0091-3057(96)00240-7 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
45 ။ Colasanti A, Searle GE, Long CJ, et al ။ စူးရှသောအမ်ဖက်တမင်းအုပ်ချုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောလူ့ ဦး နှောက်ဆုလာဘ်စနစ်တွင် endogenous opioid ဖြန့်ချိခြင်း. Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012;72(5): 371-377 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2012.01.027 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
46 ။ Giuliano ကို C, Robbins TW, နေသန် PJ, Bullmore ET, Everitt BJ ။ μ-opioid receptor တွင် opioid ဂီယာကိုတားဆီးခြင်းသည်အစားအစာရှာဖွေခြင်းနှင့်အရက်သောက်ခြင်းကဲ့သို့သောအစားအစာများကိုကာကွယ်ပေးသည်. Neuropsychopharmacology။ 2012;37(12): 2643-2652 ။ Doi: 10.1038 / npp.2012.128 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
47 ။ Nestler EJ ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား? နတ် neuroscience။ 2005;8(11): 1445-1449 ။ Doi: 10.1038 / nn1578 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
48 ။ ကင်းဘရစ် VC, Ziauddeen H, Nathan PJ, et al ။ မူးရူး - အဝလွန်လူတို့အတွက်ဝတ္ထုμ-opioid အဲဒီ receptor ရန်၏အာရုံကြောနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု. Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013;73(9): 887-894 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2012.10.022 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
49 ။ Burton CL, Noble K သည်, ဖလက်ချာ PJ ။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင် sucrose- တွဲတွေကိုတွေကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်လှုံ့ဆော်မှု: dopamine နှင့် opioid စနစ်များအတွက်ဖြစ်နိုင်သောအခန်းကဏ္ roles. Neuropsychopharmacology။ 2011;36(8): 1631-1643 ။ Doi: 10.1038 / npp.2011.44 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
50 ။ Silverman MH, Jedd K ကို, Luciana အမ် ဆယ်ကျော်သက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်အာရုံကြောကွန်ရက်များ: အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုများတစ်ခု activation ဖြစ်နိုင်ခြေခန့်မှန်းချက် Meta- ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ. Neuroimage။ 2015;122: 427-439 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2015.07.083 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
51 ။ Harris က CR, Jenkins M, Glaser D. အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ချက်တွင်ကျား၊ မကွဲပြားမှု - အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်အဘယ်ကြောင့်အန္တရာယ်လျော့နည်းစေသနည်း။ Judgm Decis Mak။ 2006;1(1): 48-63 ။ [Google Scholar]
52 ။ Alarcón, G, Cservenka A, Nagel BJ ။ ဆုပေးရန်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အာရုံကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုသည်ပါဝင်သူများ၏လိင်နှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်ဆက်စပ်သည်. ဦးနှောက် Cogn။ 2017;111: 51-62 ။ Doi: 10.1016 / j.bandc.2016.10.003 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
53 ။ Cohen JR, Asarnow RF, Sabb FW, et al ။ ခန့်မှန်းအမှားများကိုဆုချရန်ထူးခြားသောဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုံ့ပြန်မှု. နတ် neuroscience။ 2010;13(6): 669-671 ။ Doi: 10.1038 / nn.2558 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
54 ။ Bjork JM, Smith AR, Chen G, Hommer DW မြီးကောင်ပေါက်, လူကြီးများနှင့်ဆုလာဘ်: fMRI သုံးပြီးစိတ်ခွန်အားနိုး neurocircuitry စုဆောင်းမှုနှိုင်းယှဉ်. PLoS တစ်ခုမှာ။ 2010;5:7Doi: 10.1371 / journal.pone.0011440 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
55 ။ Geier CF၊ Terwilliger R, Teslovich T, Velanova K, Luna B. ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်နု. Cereb Cortex။ 2010;20(7): 1613-1629 ။ Doi: 10.1093 / cercor / bhp225 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
56 ။ Luijten M, Schellekens AF, Kühn S, Machielse MWJ, Sescousse G. စွဲအတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏နှောင့်အယှက်: အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှုများတစ်ခုပုံရိပ် -based Meta-analysis သည်. ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2017;74(4): 387-398 ။ Doi: 10.1001 / jamapsychiatry.2016.3084 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
57 ။ Schultz ဒဗလျူ dopamine ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများကို update. Curr Opin Neurobiol။ 2013;23(2): 229-238 ။ Doi: 10.1016 / j.conb.2012.11.012 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
58 ။ Redish အေဒီ။ တစ် ဦး ကွန်ပျူတာဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်စွဲ awry သွားပြီ. သိပ္ပံ။ 2004;306(5703): 1944-1947 ။ Doi: 10.1126 / science.1102384 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
59 ။ Knoll LJ, Fuhrmann: D, Sakhardande AL, Stamp F, Speekenbrink M, Blakemore SJ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်သိမြင်မှုလေ့ကျင့်ရေးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပြတင်းပေါက်. Psychol သိပ္ပံ။ 2016;27(12): 1620-1631 ။ Doi: 10.1177 / 0956797616671327 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
60 ။ Huizinga M၊ Dolan CV၊ ဗန် der Molen MW ။ အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအတွက်အသက် -related ပြောင်းလဲမှု: ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ငုပ်လျှိုးနေ variable ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ. Neuropsychologia။ 2006;44(11): 2017-2036 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropsychologia.2006.01.010 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
61 ။ Steinberg L. မြီးကောင်ပေါက်များ၏ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန်တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာ၏လွှမ်းမိုးမှု. နတ် Publ Gr။ 2013;14(7): 513-518 ။ Doi: 10.1038 / nrn3509 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
62 ။ Dalley JW, Robbins TW ။ အပိုင်းအစများ Impulse: neuropsychiatric သက်ရောက်မှု. နတ်ဗြာ neuroscience။ 2017;18(3): 158-171 ။ Doi: 10.1038 / nrn.2017.8 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
63 ။ Cardinal RN, Pennicott DR, Lakmali CL, Robbins TW, Everitt BJ ။ နျူကလိယကိုတွေ့ရှိရပါသည်အားဖြင့်ကြွက်များတွင်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုရွေးချယ်မှု core accumbens. သိပ္ပံ။ 2001;292(5526): 2499-2501 ။ Doi: 10.1126 / science.1060818 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
64 ။ et al Besson M က, Pelloux Y ကို, Dilleen R ကို။ မြင့်မားသောနှင့်အနိမ့်ထကြွလွယ်သောကြွက်များတွင် Zif268, D2 နှင့် 5-HT2c receptors ၏ frontostriatal စကားရပ်၏ကိုကင်းမော်ဂျူ. Neuropsychopharmacology။ 2013;38(10): 1963-1973 ။ Doi: 10.1038 / npp.2013.95 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
65 ။ et al Besson M, Belin: D, McNamara R နျူကလိယ၏အဓိကနှင့် shell ကို subregions အတွက် dopamine D2 /3အဲဒီ receptors အားဖြင့်ကြွက်များတွင်ထကြွလွယ်၏သီးခြားထိန်းချုပ်မှု accumbens. Neuropsychopharmacology။ 2009;35(2): 560-569 ။ Doi: 10.1038 / npp.2009.162 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
66 ။ Olmstead MC, Ouagazzal လေး, Kieffer BL ။ Mu နှင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် opioid receptors တို့သည်အချက်ပြနှာခေါင်းထိုးသည့်အလုပ်တွင် motor impulsivity ကိုဆန့်ကျင်စွာထိန်းညှိပေးသည်. PLoS တစ်ခုမှာ။ 2009;4:2Doi: 10.1371 / journal.pone.0004410 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
67 ။ ဂျော်ဒန် CJ, Andersen က SL ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု၏အထိခိုက်မခံကာလ - မှီခိုမှုသို့ကူးပြောင်းခြင်းအတွက်စောစီးစွာအန္တရာယ်. dev Cogn neuroscience။ 2016 ။ Doi: 10.1016 / j.dcn.2016.10.004 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
68 ။ Belin: D, Belin-Rauscent A, Murray JE, Everitt BJ ။ စွဲ: maladaptive မက်လုံးပေးအလေ့အထများကိုထိန်းချုပ်၏ပျက်ကွက်. Curr Opin Neurobiol။ 2013;23(4): 564-574 ။ Doi: 10.1016 / j.conb.2013.01.025 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
69 ။ Boileau I, Dagher A, Leyton M, Al E လူတို့၏စိတ်ကြွဆေးကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းပုံစံ - ကျန်းမာသောယောက်ျားများတွင် [11c] raclopride / positron ထုတ်လွှတ်ခြင်း tomography လေ့လာမှု။. Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;63(12): 1386-1395 ။ Doi: 10.1001 / archpsyc.63.12.1386 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
70 ။ di Ciano P ကို, Underwood RJ, Hagan JJ, Everitt BJ ။ SBX-3-A ကိုရွေးချယ်သော d277011 dopamine receptor antagonist အားဖြင့် cue ထိန်းချုပ်ထားသောကိုကင်းကိုရှာဖွေခြင်း၏ attenuation. Neuropsychopharmacology။ 2003;28(2): 329-338 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300148 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
71 ။ Belin: D, Berson N, Balado E, Piazza PV, Deroche-Gamonet V. မြင့်မားသော - အသစ်အဆန်း - preference ကိုကြွက် compulsive ကိုကင်း Self- အုပ်ချုပ်မှုမှ predisposed နေကြသည်. Neuropsychopharmacology။ 2011;36(3): 569-579 ။ Doi: 10.1038 / npp.2010.188 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
72 ။ Corbit LH, Nie H၊ Janak PH ။ လေ့အရက်ရှာ: အချိန်သင်တန်းနှင့် dorsal striatum ၏ငျဒသေ၏ပံ့ပိုးမှုများ. Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012;72(5): 389-395 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2012.02.024 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
73 ။ Zapata A၊ Minney VL၊ Shippenberg TS ။ ကြွက်များတွင်ကြာရှည်အတွေ့အကြုံကိုရှာလေ့ကိုကင်းဖို့ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထားရာမှ shift. J ကို neuroscience။ 2010;30(46):15457–15463. doi:10.1523/JNEUROSCI.4072-10.2010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
74 ။ Everitt BJ, Belin: D, Economidou: D, Pelloux Y, Dalley JW, Robbins TW ။ အဆိုပါ compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအလေ့အထများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အားနည်းချက်နဲ့စွဲအခြေခံအာရုံကြောယန္တရားများ. ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008;363(1507): 3125-3135 ။ Doi: 10.1098 / rstb.2008.0089 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
75 ။ Belin: D, Everitt BJ ။ ကိုကင်းရှာကြံအလေ့အထဟာ dorsal striatum အတူ ventral ချိတ်ဆက် dopamine-မှီခိုအမှတ်စဉ်ဆက်သွယ်မှုအပေါ်မူတည်. အာရုံခံဆဲလျ။ 2008;57(3): 432-441 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2007.12.019 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
76 ။ Molander AC, Mar A, Norbury A, et al ။ ကြွက်များတွင်ကိုကင်းမှီနိုင်စွမ်းအားကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုမြင့်မားမှု. Psychopharmacology (Berl)။ 2011;215(4):721–731. doi:10.1007/s00213-011-2167-x [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
77 ။ Goldstein RZ, Volkow ND ။ စွဲလမ်းအတွက် prefrontal cortex ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု: တွေ့ရှိချက်များနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု neuroimaging. နတ်ဗြာ neuroscience။ 2012;12(11): 652-669 ။ Doi: 10.1038 / nrn3119.Dysfunction [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
78 ။ Conrod PJ, Castellanos-Ryan N, Strang J ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်2နှစ်တာကာလအတွင်းအတိုချုပ်၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပစ်မှတ်ထားသောဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရည်ဆိုင်ရာကြားဝင်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောသုံးစွဲသူအဖြစ်ရှင်သန်ခြင်း. Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010;67(1): 85 ။ Doi: 10.1001 / archgenpsychiatry.2009.173 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
79 ။ Everitt BJ, Robbins TW ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များကနေအလေ့အထမှ compulsion မှ. နတ် neuroscience။ 2005;8(11): 1481-1489 ။ Doi: 10.1038 / nn1579 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
80 ။ American Psychiatric Association ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်: DSM-5။ Philadelphia တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံ။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း၊ 2013 ။ [Google Scholar]
81 ။ Schultz ဒဗလျူ အာရုံကြောဆုလာဘ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အချက်ပြမှုများ: သီအိုရီကနေဒေတာ. Physiol ဗြာ။ 2015;95(3): 853-951 ။ Doi: 10.1152 / physrev.00023.2014 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
82 ။ Diamond A, Barnett SW, သောမတ်စ် J, Munro အက်စ် မူကြိုအစီအစဉ်သည်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်. သိပ္ပံ။ 2007;30: 1387-1388 ။ Doi: 10.1126 / science.1151148 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
83 ။ Schultz ဒဗလျူ ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်သင်တန်းများမှာအကွိမျမြားစှာ dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များကို. Annu ဗြာ neuroscience။ 2007;30(1): 259-288 ။ Doi: 10.1146 / annurev.neuro.28.061604.135722 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]